Ventral Tegmental Areaရိယာနှင့် Locus Coeruleus Catecholamine Neurons ၏ Opiate-Induced Molecular and Cellular ပလပ်စတစ် (2012) - သင့် ဦး နှောက်ဟာသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်မှာ
Opiate-သွေးဆောင်မော်လီကျူးများနှင့် Ventral Tegmental ဧရိယာ၏ဆယ်လူလာပလပ်စတစ်နှင့် Locus Coeruleus catecholamines အာရုံခံ (2012)
အေးနွေ Harb ရှုထောင့် Med ။ 2012 ဇူလိုင်;2(7): a012070 ။ Doi: 10.1101 / cshperspect.a012070 ။
Michelle အက်စ် Mazei-Robison နှင့်
အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Fishberg ဦးစီးဌာနနှင့် Friedman ဦးနှောက် Institute မှ, ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, နယူးယောက်, New York က 10029
opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်အာရုံခံအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏လေ့လာမှုကသူတို့ကျယ်ပြန့်ဆေးညွှန်းများနှင့် nonprescription အသုံးပြုမှုပေးထားယနေ့အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးအာရုံကြောစနစ်အပေါ်ယင်းသို့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောလုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. လူသိများပေမဲ့, အလုပ်၏ကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်အပြည့်အဝသူတို့ရဲ့နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနားလည်ရန်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ opiates ၏ကွဲပြားအပြုအမူလုပ်ရပ်များဖျန်ဖြေနှစ်ခု catecholaminergic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရှည်-တည်တံ့အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်အာရုံစိုက်: ventral tegmental ဧရိယာမူးယစ်ဆေးအကျိုးသည်အရေးကြီးသော (VTA) dopaminergic အာရုံခံ, နှင့် locus coeruleus (LC) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘို့အအရေးကြီးသော noradrenergic အာရုံခံ, မှီခိုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေး။ ကျနော်တို့ opiate မှီခိုနှင့်စွဲလမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေဤဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဆယ်လူလာအတွက်အပြောင်းအလဲ Synaptic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity အာရုံစိုက်ပါ။ ဒီ opiate-သွေးဆောင် plasticity ၏မော်လီကျူးဆုံးအဖွတျကိုနားလည်ခြင်း opiate စွဲများအတွက်ပိုကောင်းကုသမှုနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ကောင်းပိုလုံခြုံ opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါဖြစ်လိမ့်မည်။
သောကြောင့်သူတို့ရဲ့အစွမ်းထက် analgesic ဂုဏ်သတ္တိများ၏, opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများရာစုနှစ်များစွာအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Opiates ထိုကဲ့သို့သောမော်ဖင်းအကိုက်နှင့် codeine အဖြစ်ဘိန်းကနေဆင်းသက်လာဒြပ်ပေါင်းများအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောဘိန်းဖြူ, oxycodone နှင့် hydrocodone အဖြစ်အများအပြားဒြပ်အနကျအဓိပ်ပါယျပါဝင်သည်။ ထိုအပါဆုံးမော်ဒယ်စနစ်များကိုလေ့လာခဲ့ကြအတိုင်းဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျနော်တို့မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ဘိန်းဖြူ၏လုပ်ရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ စူးရှသောနာကျင်မှုကိုကုသထိရောက်မှုနေသော်လည်းသည်းခံစိတ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုနှင့်စွဲလမ်း (အပါအဝင်ရေရှည် opiate အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြင်းထန်သောရောဂါများရှိပါတယ်Ballantyne နှင့် LaForge 2007) ။ ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးများနှင့်အထူးသနာကျင်မှု-သက်သာရာ opiates ၏အလွဲသုံးစားမှု, (အရွယ်ရောက်သူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အမေရိကန်လူဦးရေနှစ်ဦးစလုံးအတွက်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အလွန်တိုးတက်လျက်ရှိသည်Compton နှင့် Volkow 2006; Manchikanti et al ။ 2010) ။ နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါကုသမှုကိုပိုမိုရန်လိုဖြစ်လာသည်အဖြစ် opiates ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုကိုလည်း (တဖြည်းဖြည်းထမြောက်တော်မူပြီKuehn 2007) ။ opiate မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုအပေါ်သို့မဟုတ်အောက်မှာနာတာရှည်နာကျင်မှုကုသမှုနှင့်အလားအလာများကျင့်ဝတ်အခြေအတင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ပေမယ့် (fields 2011), နာတာရှည် opiate အသုံးပြုမှုမလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု neuroadaptations ဖြစ်ပေါ်စေသည်မရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းမရှိ။
opiates ဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုနှင့်စွဲတစ်ချိန်ကနီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေစဉ်းစားကြသည် ဟူ. ၎င်း, သို့သော်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ယခုအခါ (ဦးနှောက်အတွင်းကွဲပြားယန္တရားများနှင့်ဆားကစ်ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုယုံကြည်နေကြသည်Koob နှင့် Le Moal 2001) ။ မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာချိန်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုအဖြစ်အပျက်သဘောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ (ဥပမာ, ချွေး, ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု, ဝမ်းလျှော) ထင်ရှားနေသည်။ စွဲလမ်းသို့မဟုတ် "ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို" ဟုအဆိုပါ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲများကသတ်မှတ်အဖြစ်, ကျန်းမာရေးနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအပေါ်တစ်ဦးလေးနက်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးရှာအပျက်သဘောအကျိုးဆက်များနေသော်လည်းမူးယစ်ဆေးယူဖို့မလှူဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်, ဒီထို့အပြင် phenotype ၏ဖွယ်ရှိ, မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကြောင်း "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို," ရောင်ပြန်ဟပ်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့အသီးသီး opiate စွဲနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ play ကြောင်း catecholamines အာရုံခံကြွယ်ဝနှစ်ခုဦးနှောက်ဒေသများတွင်ပေါ်ပေါက်သော neuroadaptations, ဒါမှမဟုတ် opiate-သွေးဆောင် plasticity, အကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုဆွေးနွေးရန်: အ midbrain ventral tegmental အတွင်း dopaminergic အာရုံခံ ဧရိယာ (VTA) နှင့် pontine locus coeruleus (LC) အတွင်း noradrenergic အာရုံခံ။ glutamatergic အတွက် Synaptic plasticity-persistent အပြောင်းအလဲများနှင့် GABAergic Synaptic ဂီယာ (: ဒီဆွေးနွေးမှုကဤဒေသများတွင် opiate-သွေးဆောင် plasticity အမျိုးအစားသုံးမျိုးအပေါ်အလေးပေးDacher နှင့် Nugent 2011b; Luscher နှင့် Malenka 2011); intracellular အချက်ပြကက်စကိတ်အတွက်ဆယ်လူလာ plasticity-homeostatic အပြောင်းအလဲများကို (Williams က et al ။ 2001; Nestler 1992, 2004); အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity-ရှည်တည်မြဲအပြောင်းအလဲများကို (Russo et al ။ 2010) ။ ဦးနှောက်ရဲ့ catecholaminergic အာရုံခံအတွက် plasticity ဤသုံးမျိုး၏မော်လီကျူးဆုံးအဖွတျခှဲခွားသစွဲလမ်း၏အခြားအရေးကြီးသောအာရုံကြောအလွှာအတွက်သွေးဆောင်ပလတ်စတစ်တစ်မော်ဒယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် opiate စွဲနှင့် analgesia များအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်ပိုလုံခြုံ opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်ပိုကောင်းကုထုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
VENTRAL TEGMENTAL တစ်ဝိုက်
အဆိုပါ VTA ကျယ်ပြန့်ဆုလာဘ်အတွက်၎င်း၏အခြေခံအခန်းကဏ္ဍပေးထားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်ကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dopamine တိုးလာ DA လွှတ်ပေးရန်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအတန်းအစားတုံ့ပြန်မှတ်ချက်ပြုထားသည်ရှိရာနျူကလိယ accumbens (NAc) အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများသို့ VTA စီမံကိန်းတွင် (DA) အာရုံခံ, (di Chiara နှင့် Imperato 1988) ။ DA အာရုံခံဒီ midbrain နျူကလိယ၏ထင်ရှားသောအဘို့ကို (~60% -65%) ရှိနေစဉ်သို့သော်, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဆယ်လူလာမတူကွဲပြားမှု (ကသိသိသာသာဂါဘမြို့သားအာရုံခံ (30% -35%) ၏အဘို့ကိုအဖြစ် glutamatergic အာရုံခံ၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူရှိ၏ 2% -3%) (Swanson 1982; Nair-Roberts သည် et al ။ 2008; Sesack နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2010) ။ အဆိုပါ DA နှင့် ventral midbrain အတွင်းဂါဘမြို့သားအာရုံခံ, ယေဘုယျထဲမှာ, NAc ပါဝင်သည်ဟုအဓိကထွက်ရှိအဆောက်အဦများ, prefrontal cortex (PFC), နှင့် amygdala (Amy) နဲ့မြေမျက်နှာသွင်ပြင်စီမံကိန်းကို (medial lateral မှ) (ကျယ်ပြန့်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် Sesack နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2010()သဖန်းသီး။ 1) ။ VTA မှမူလတန်း afferents PFC, pedunculopontine နှင့် laterodorsal tegmentum (PPTg နှင့် LDT) မှ excitatory သွင်းအားစုအဖြစ်များစွာသောအခြားမကြာသေးမီကသတ်မှတ်အဆောက်အဦများ (ပါဝင်သည်Geisler et al ။ 2007) ။ (ထို VTA ဖို့ inhibitory input ကိုလျော့နည်းကောင်းစွာသတ်မှတ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ NAc ကနေသွင်းအားစု, ventral pallidum နှင့် rostromedial tegmental နျူကလိယ (RMTg) mesopontine အစီရင်ခံခဲ့ကြSesack နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2010) ။ ယနေ့အထိသုတေသန (VTA အတွက် DA အာရုံခံအပေါ်အချိုးအစားမမျှအာရုံစူးစိုက်ခြင်း, NAc မှပရောဂျက်တစ်ခုကိုတိတိကျကျသူများကြောင့်ဆုလာဘ်အတွက်ဤစီမံကိန်းများ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်Nestler 2004).
တစ်ဦး sagittal အဆိုပါ VTA သရုပ်ဖော်ကြွက်ဦးနှောက်၏အပိုင်းများနှင့် LC နှင့်၎င်းတို့၏အဓိက afferent နှင့် efferent စီမံကိန်း၏ကာတွန်း။ limbic နှင့် cortical အဆောက်အဦမှ VTA စီမံကိန်းတွင် DAergic (အနီ) နှင့် GABAergic (အပြာ) အာရုံခံခြင်းနှင့် glutamatergic (အနက်ရောင်-dash, PFC) နှင့် GABAergic input ကို (အပြာရောင်-dash, NAc, VP) လက်ခံရရှိသည်။ Noradrenergic အာရုံခံ (အစိမ်းရောင်) HIPP နှင့် PFC အပါအဝင် LC innervate မျိုးစုံဒေသများနှင့် PGi ထံမှ glutamatergic input ကိုလက်ခံရရှိသည်။ အတိုကောက်: Amy, amygdala; HIPP, hippocampus; LC, locus coeruleus; NAc, နျူကလိယ accumbens; PFC, prefrontal cortex; PGi, နျူကလိယ paragigantocellularis; VP, ventral pallidum; VTA, ventral tegmental ဧရိယာ။
အဆိုပါ NAc အတွက်တိုးမြှင့် DA လွှတ်ပေးရန်ထုတ်ယူဖို့ VTA သို့စူးရှမော်ဖင်းအကိုက်များ၏စွမ်းရည် (ပေးထားLeone et al ။ 1991), အလုပျ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏဟာ VTA အတွက် opiates ၏စူးရှသောသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ acute မော်ဖင်းအကိုက် (VTA အတွက် DA အာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုတိုးပွားစေGysling နှင့်ဝမ် 1983) ။ ဒီအကြိုးသကျရောဂျီမှမော်ဖင်းအကိုက်၏စည်းနှောင်အားဖြင့်အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်I / O(ထိုသို့သောအားဖြင့်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုနဲ့ DA အာရုံခံအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်လျော့ကျလာခြင်းနှင့် DA အာရုံခံ၏ disinhibition အတွက်ရရှိလာတဲ့ဒေသခံဂါဘမြို့သားအာရုံခံအပေါ်μ-opioid အဲဒီ receptor (Mor) -coupledဂျွန်ဆင်နှင့်မြောက် 1992) ။ သို့သော်အစောပိုင်း electrophysiology အလုပ်အများကြီး၏အနက်ကို ((အရွယ်အစား, shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့် electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်ဖြစ်စေ) VTA DA နှင့်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ၏အနီးအပါးချွတ်စွပ်အရွယ်အစားသဘောသဘာဝမီးမောင်းထိုးပြသက်သေအထောက်အထားအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်Margolis et al ။ 2006), VTA အာရုံခံသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းထားသည့်ဥပမာ,) စသည်တို့ကို immunohistochemistry, GFP သတင်းထောက်ကြွက်၏အသုံးပြုမှုကိုက (ပိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နောက်ပိုင်းတွင်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုထဲမှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမည်တဲ့အချက်လေ့လာခဲ့သည်။ ဒီဆေးတွေအများဆုံးမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုလယ်ပြင်၌လေ့လာကြိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်အဖြစ်ဤတွင်ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမော်ဖင်းအကိုက်အဖြစ် VTA အတွက် Mor မှာ agonists အဖြစ်ပြုမူကြောင်း opiates, အာရုံစိုက်ပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကိုလည်း VTA DA အာရုံခံအပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်κ-opioid receptors (KOR) ထိုလူသိများသည်, ဤ receptors ၏ activation ကိုတိုက်ရိုက် (DA အာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းတားစီးနိုင်ပါတယ်Margolis et al ။ 2003), ဖွယ်ရှိ Kappa agonists ၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုမှပံ့ပိုး။ အဆိုပါ VTA DA အာရုံခံဆဲလျ activation နှင့်တားစီးနှစ်ဦးစလုံးထုတ်လုပ်ရန် opiates ၏စွမ်းရည်များနှင့်ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှု, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပြီး, ဒီ "yin-yang" မော်ဂျူနှင့်ဆုလာဘ်အတွက် endogenous opioid peptides ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအနာဂတ်လေ့လာမှုတစ်ခုအာရုံဖြစ်ထိုက်တန်ပါတယ်။
acute Opiate-သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်
အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများအပြင်စူးရှသော opiates အားဖြင့်သွေးဆောင် Synaptic plasticity များစွာသောအစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်။ ကိုကင်းနှင့်အခြားနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအမျှမော်ဖင်းအကိုက်တစ်ခုတည်းဆေးထိုးဖို့α-အမိုင်နို-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic အက်ဆစ် (AMPA) ၏အချိုးအစားတိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် N-methyl-D-aspartic အက်ဆစ် (NMDA) DA အာရုံခံပေါ်သို့ glutamatergic synapses ၏ရေရှည်အလားအလာ (LTP) နဲ့ကိုက်ညီ 24 နာရီအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် excitatory postsynaptic ရေစီးကြောင်း (EPSCs), (Saal et al ။ 2003) ။ မကြာသေးမီကလည်း (စူးရှသောမော်ဖင်းအကိုက်ကိုကင်းနဲ့ဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌ VTA အတွက် AMPAR အဲဒီ receptor (AMPAR) ပြန်လည်ခွဲဝေမှု induces ကြောင်း GluA2-ချို့တဲ့ AMPARs ၏အထူးအနေနဲ့သွင်းအစီရင်ခံထားလိုက်ပါတယ်ဘရောင်း et al ။ 2010) ။ ဘရောင်း et al ။ (တစ်ဦးတိုးလာချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအညွှန်းကိန်းလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စူးရှသောမော်ဖင်းအကိုက်တုန့်ပြန်ရွေးချယ် channelrhodposin2စကားရပ်ကိုသုံးပြီး VTA အတွက် DA အာရုံခံတိုက်ရိုက်ဆွခြင်းဖြင့် recapitulated ကြောင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု cytoplasmic GluA2 AMPAR တိုးလာဘရောင်း et al ။ 2010), ကိုတိုက်ရိုက် glutamatergic စည်းမျဉ်းမှ VTA အတွင်း DA လှုပ်ရှားမှု / အချက်ပြ implicating ။ ဤရွေ့ကားဒေတာကြောင့် GluA1 အစောပိုင်းကအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီသော်လည်း, GluA2, VTA အတွက် overexpression (မော်ဖင်းအကိုက်ရဲ့ locomotor-လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကြိုးအပြုအမူတွေမှတိရိစ္ဆာန်များ sensitizes မဟုတ်Carlezon et al ။ 1997).
acute opiates လည်း VTA အတွက် GABAergic synapses မှာ plasticity သြဇာလွှမ်းမိုး။ high-frequency ကိုဆွ (ဂါဘမြို့သားဆိပ်ကမ်းမှာ LTP LTP ထုတ်ယူနိုင်ရန်တွေ့ရှိရထားသည်ဂါဘမြို့သား) VTA DA အပေါ်အာရုံခံ, postsynaptic NMDA receptors (NMDAR) ၏ activation နှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏လွှတ်ပေးရေးအပေါ်မှီခိုကြောင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု (NO) DA အာရုံခံ (နေ retrograde တမန်အဖြစ်Nugent et al ။ 2007) ။ NO ထို့နောက်တိုးမြှင့်ဂါဘမြို့သားဖြန့်ချိခြင်းနှင့် LTP မှဦးဆောင်သည့်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံဆဲလျအတွက် guanylyl cyclase (GC) လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးဂါဘမြို့သား။ မော်ဖင်းအကိုက်တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းထိုး LTP ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ဂါဘမြို့သား (2 ရက်ပေါင်းဆေးထိုးအောက်ပါ 24 နှင့်5နာရီစောင့်ကြည့်လေ့လာပေမယ့်မဟုတ်), အ NO-GC-ပရိုတိန်း kinase, G (PKG) signal ကိုအဆငျ့ဆငျ့ကြားဖြတ်ပုံမှန် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့် (Nugent et al ။ 2007, 2009; Niehaus et al ။ 2010) ။ ထို့ကြောင့် LTP ၏နှောင့်အယှက်ဂါဘမြို့သား VTA DA အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ဖို့စူးရှ opiates များ၏စွမ်းရည်ကိုနောက်ထပ်ယန္တရားပေးပါသည်။
မကြာသေးမီက VTA GABAergic plasticity ၏အခြားပုံစံဖော်ပြထားခဲ့ပြီး: DA အာရုံခံပေါ်သို့ GABAergic synapses ၏ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (, LTDဂါဘမြို့သား()Dacher နှင့် Nugent 2011a) ။ အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းဆွ (LFS), တည်ငြိမ်တဲ့, LTD အသုံးပြုခြင်းဂါဘမြို့သား DA ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ LTP မတူဘဲအတွက်ကြောင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည်ဂါဘမြို့သား, postsynaptically ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နှင့် NMDAR အပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိပါ။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်း endocannabinoid အချက်ပြအပေါ်မှီခိုမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် dopamine D2 အဲဒီ receptor (D2R) ရန် sulpiride ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုတည်းမော်ဖင်းအကိုက်ထိုး LFS-သွေးဆောင်, LTD မှကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောခဲ့သည်ဂါဘမြို့သား နာရီအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 24 သောမော်ဖင်းအကိုက်အကြံပြုခြင်း bidirectionally (VTA အတွက်ဂါဘမြို့သား plasticity ထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်Dacher နှင့် Nugent 2011a).
နာတာရှည် Opiate-သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်
စူးရှသော opiates နှင့်အတူပေါ်ပေါက်သော Synaptic အပြောင်းအလဲများကိုအတော်လေးကောင်းစွာစရိုက်လက္ခဏာတွေခဲ့ကြသော်လည်း, နာတာရှည်အပြောင်းအလဲများရှိသည်မဟုတ်။ ယနေ့အထိအနည်းငယ်မဆိုလေ့လာမှုများနာတာရှည် opiate အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန် gluatamatergic သို့မဟုတ် GABAergic plasticity ဖြစ်စေပြောင်းလဲမှုများဆန်းစစ်ကြလျှင်။ ဤသည်တက်ကြွစွာမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး vs. passive အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ရှိမရှိအဖြစ်အသိပညာမရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ VTA အတွက် LTP များ၏ဇွဲ (3 လအထိ) ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေ abstinent ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးခင်ကအလုပ်ပေးထားသောအရေးပါသည့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပေါ် သာကဆက်ပြောပါတယ်ကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူ (ချန် et al ။ 2008).
သို့ရာတွင်ထိုသို့နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်စူးရှသောမော်ဖင်းအကိုက်လိုပဲ DA အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးကြောင်းလူသိများသည်။ နှစ်ဦးစလုံး Basal ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းအတွက်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ရှိုးတိုးအောက်ပါ Vivo အသံသွင်းခုနှစ်တွင်နှင့် (ရုပ်သိမ်းရေးကာလအတွင်းအခြေခံမှပြန်လာကြောင်းလှုပ်ရှားမှုပြင်းစွာတိုက်ဇော့ et al ။ 2006) ။ ဤ (မော်ဖင်းအကိုက်-ဆုတ်ခွာကြွက်များတွင် DA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းဇွဲကျဆင်းခြင်းလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းယခင်အလုပ်မတူဘဲ၌တည်ရှိ၏ဒိုင်ယာနာ et al ။ 1995, 1999) ။ ထိုကွဲပြားမှုများအတွက်တစ်ခုမှာအလားအလာအကြောင်းပြချက်အသုံးပြုသောအုပ်ချုပ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ဇော့ et al ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရေပြားအောက်ဆုံး (SC) အသုံးပြုတဲ့အစောပိုင်းကဒိုင်ယာနာ et al အတွက်အသုံးပြုတဲ့နာတာရှည်မြင့်တက်ထိုးပါရာဒိုင်းထက်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသော pharmacodynamic ပရိုဖိုင်းရှိသည်ဖို့ပြသထားပြီးဖြစ်သောလွှတ်ပေးရန်တောင့်ပါရာဒိုင်း, ထောကျ။ လေ့လာမှုများ။ ယခင်ကအစီရင်ခံအဖြစ် (Fischer et al ။ 2008အဆိုပါနာတာရှည်ဆေးထိုးမော်ဒယ်တစ်ဦးသိပ်မြင့်မားတဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုထုတ်လုပ်စဉ်), နောက်ဆုံးမော်ဖင်းအကိုက်တောင့်ပြီးနောက် 24 နာရီ, သွေးမော်ဖင်းအကိုက်အဆင့်ဆင့် 3000 မှာ (~10,000 ng / ml), (~1 ng / ml) ကိုအထွတ်အထိပ်နှင့်အတူအတော်လေးတည်ငြိမ်ကျန်ရှိနေသေးသော, လျော့နည်းသွားကြသည်မဟုတ် နာရီ, 100 ng အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသွေးတော်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ / ml4နာရီအကြာတွင်နှင့် 12 နာရီအားဖြင့်မှုမရှိခြင်းကို။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထံမှဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်မှုနှုန်းပစ်ခတ် DA အတွက်ပြောင်းလဲမှု, အခြေခံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြေခံသို့မဟုတ်လျော့နည်းရန်ပြန်လာခြင်းရှိမရှိ, ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထံမှဆုတ်ခွာ (VTA DA အာရုံခံပေါ်သို့ဂါဘမြို့သား inhibitory postsynaptic ရေစီးကြောင်း (IPSCs) နှင့်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးBonci နှင့်ဝီလျံ 1997မကြာသေးမီက Mor ၏ပြန်လည်ပေါ်နှင့်သိသိ adenosine-5'-monophosphate အပေါ်မှီခိုဖြစ်တွေ့ရှိထားပြီးကြောင်း), တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှု (Camp) အချက်ပြ (Madhavan et al ။ 2010).
လေ့လာမှုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမှနောက်ထပ်အလားအလာရှိသောပံ့ပိုး (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့), LC နှိုင်းယှဉ် VTA ၏ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသည်။ မသာမျိုးစုံကိုဆဲလ်အမျိုးအစားများ (DA vs. အဓိကအားဂါဘမြို့သား) ၏ရှုပ်ထွေးလည်းမရှိ, ဒါပေမယ့်ဆဲလ်အမျိုးအစားများ၏ဖြန့်ဖြူးကိုလည်း (ထို rostral-caudal VTA ဝင်ရိုးတလျှောက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသည်သဖန်းသီး။ 2) ။ အထူးသဂါဘမြို့သားအာရုံခံမှ DA ၏အချိုးအစား (caudal ငျဒသေ (PN, PIF) ကိုနှိုင်းယှဉ် rostral VTA ငျဒသေ (IFN, RL) တွင်အများကြီးပိုမြင့်Nair-Roberts သည် et al ။ 2008) ။ ဤသည်ခြားနားချက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ က caudal VTA ကိုလည်းစခန်း-တုံ့ပြန်မှု-ဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်း (CREB) သို့မဟုတ် phospholipase ကို C gamma (PLCγ) (၏ဗိုင်းရပ်စ် overexpression အပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဆန္ဒရှိအပြုအမူသွေးဆောင်သော်လည်း HSV-GluA1 overexpression, rostral VTA သို့ထိုးနှင့်အတူမော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်အပြုအမူတိုးလာCarlezon et al ။ 2000; Bolanos et al ။ 2003; Olson et al ။ 2005) ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်သွေးဆောင်အတိုင်းဤခြားနားချက်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် (CRE) rostral နှင့် caudal VTA အတွက် DA အာရုံခံအတွက်ကူးယူ -mediated ပေမယ်သာ (rostral VTA အတွက် Non-DA အာရုံခံလေ့လာခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ကောင်းစွာမော်လီကျူးအဆင့်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်Olson et al ။ 2005) ။ Ultrastructural လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သော rostral-caudal ကွဲပြားခြားနားမှုအတည်ပြုဖို့နှင့်ကုသမှု regimen နှင့်စီမံကိန်း output ကို၏ဆက်ပြောသည်ရှုပ်ထွေးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ GluA1 နှစ်ဦးစလုံး tyrosine hydroxylase (TH) (DAergic) -positive နှင့် TH-အနုတ်လက္ခဏာ (ဖွယ်ရှိ GABAergic) တွင်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်တစ်ခုတည်းမော်ဖင်းအကိုက်ထိုးနှင့်အတူ parabrachial (PBP) VTA အတွက် dendrites ။ ဆနျ့ကငျြ, နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်တကွ, paranigral အတွက် GluA1 တစ်ခုတိုး (PN) ကို PBP ဒေသအပြင် VTA ရှိခဲ့ (ယာဉ်ကြော et al ။ 2008).
VTA အတွင်းဆယ်လူလာနှင့်စီမံကိန်းရှုပ်ထွေး။ DA ဂါဘမြို့သားမှ (အနီ) (အပြာ) တွင် neuron များ၏အချိုးအစားမြင့်မားတဲ့ DA နှင့်အတူ VTA subnuclei အကြားကွဲပြားခြားနားသည်ထိုသို့သော paranigral (PN) နှင့် parainterfascicular (အဖြစ်ကိုပိုမို caudal subnuclei နှိုင်းယှဉ်ထိုကဲ့သို့သော rostral linear နျူကလိယ (RL) အဖြစ်ကပို rostral ငျဒသေလေ့လာဂါဘမြို့သားအချိုး PIF) ဒေသများ။ ထိုကဲ့သို့သော PN အဖြစ် medial ဒေသများ amygdala (Amy) အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားစီမံချက်များရှိသော်လည်းထို့အပြင် DA အာရုံခံစီမံချက်များ prefrontal cortex (PFC), NAc နှစ်ဦးနှစ်ဖက် shell ကို (လတ် SH) မှထုတ်လုပ်တဲ့ထိုကဲ့သို့သော parabrachial နျူကလိယအဖြစ်ပိုပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒေသများ (PBP) နဲ့ VTA နှင့်အတူတလျှောက်လုံးကွာခြား , NAc core ကိုနှင့် NAc medial shell ကို (Med SH) ။ ကန့်သတ်အလုပ်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံစီမံချက်များလေ့လာမူပြီ PFC မှပရောဂျက်တစ်ခုကိုအနည်းငယ် rostral PBP DA အာရုံခံပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ caudal DA PBP projection ရှိပါတယ်သော်လည်း rostral PBP အတွက်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ PFC ဖို့ခိုင်မာတဲ့အနာဂတ်ရှိသည်အချို့သက်သေအထောက်အထားများ, သည်ရှိ၏, ဒီ (အ PBP-PFC projection သာဒေသတွင်းသတ်မှတ်မပေးကြောင်းအကြံပြု, ဒါပေမယ့်လည်းအာရုံခံ-မျိုးကွဲတိကျတဲ့ဖြစ်ပါသည်Lammel et al ။ 2008) ။ (မသုံးဆဲလ်အရေအတွက်မှသည်များမှာ Nair-Roberts သည် et al ။ 2008 နှင့်စီမံကိန်း retrograde တံဆိပ်ကပ်ခြင်းလေ့လာမှုများအားဖြင့်ထံမှများမှာ Lammel et al ။ 2008.)
ဒါကြောင့်ယခုကောင်းစွာ DA အာရုံခံ၏ electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများစီမံကိန်းကြောင့်ကွဲပြားမြဲမြံစွာတည်သည်အတိုင်းသူတို့ရဲ့ output ကိုဒေသအပေါ်အခြေခံပြီး VTA DA အာရုံခံအကြားကွာခြားချက်များ, မကြာသေးမီကအလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်ရပြီ။ NAc မှထုတ်လုပ်တဲ့ VTA DA အာရုံခံတစ်ဦးပိုပြီးသေးငယ်ငါh basolateral amygdala (BLA) မှထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံထက်လက်ရှိ (Ford ကား et al ။ 2006), နှင့် DA အာရုံခံအများကြီးပိုမိုမြင့်မားငါပြသ NAc နှစ်ဦးနှစ်ဖက် shell ကိုမှထုတ်လုပ်တဲ့နှင့်အတူ NAc သူ့ဟာသူအတွင်းစီမံကိန်းများတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်h NAc medial shell ကိုမှပရောဂျက်တစ်ခုကို DA အာရုံခံထက်လက်ရှိ (Lammel et al ။ 2011) ။ PFC-ထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံဆဲလျအေပီကြာချိန်တိုတောင်းကြောင်း, Amy-ထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံ (အတိုဆုံးကြာချိန်ရှိစဉ်အခါ NAc-ထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံ, အရှည်ဆုံး AP ကြာချိန်ရှိသည်အဖြစ် DA အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုအလားအလာ (AP) ကိုကြာချိန်ကိုလည်းစီမံကိန်းကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသည်Margolis et al ။ 2008) ။ အရေးကြီးတာက, opiates မှတုန့်ပြန်လည်းအနာဂတ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အဆိုပါ VTA အတွင်းထူးခြားပေါ်လာသော: ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတစ်ဦး Mor / မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (ဒေါ) agonist မှတုန့်ပြန်များအတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်သော်လည်း NAc မှထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံ, BLA-ထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံထက် KOR agonists ပိုပြီးတုန့်ပြန် , BLA-ထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သော (Ford ကား et al ။ 2006) ။ တစ်ဦး KOR agonist ဂါဘမြို့သားတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတားစီးစေသောအဖြစ်ဤအဖြစ်ကောင်းစွာ presynaptically-mediated opiate သက်ရောက်မှုမှဘာသာပြန်ထားသောA BLA မှထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံ၏ IPSCs, ဂါဘမြို့သားတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သော KOR agonist-mediated တားစီးရှိခဲ့စဉ်B NAc မှထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံအတွက် IPSCs (Ford ကား et al ။ 2006) ။ ထို့အပြင်သူကမကြာသေးမီက (DA အာရုံခံအပေါ် excitatory synapses ၏မော်ဂျူ projection ပေါ် မူတည်. ကွာခြားကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Lammel et al ။ 2011). Lammel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2011) AMPA / NMDA အချိုး NAc မှစီမံကိန်းကြောင့် DA အာရုံခံအတွက်မဟုတ် PFC မှစီမံကိန်းကြောင့် DA အာရုံခံအတွက်ကင်းတိုးပွားလာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် AMPA / NMDA အချိုးတစ်ဦးဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (hindpaw formalin ဆေးထိုး) ကိုတုန့်ပြန် PFC မှထုတ်လုပ်တဲ့ DA ဆဲလ်တွေအတွက်လည်း NAc နှစ်ဦးနှစ်ဖက် shell ကိုမှစီမံကိန်းကြောင့် DA အာရုံခံလေ့လာ, ဒါပေမယ့် NAc မှထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံအတွက်ပျက်ကွက်ခဲ့ကာအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးပွားလာခဲ့သည် ဤစီမံကိန်းပစ်မှတ်၏ငျဒသေအတှငျးရှိတုံ့ပြန်မှုအတွက် medial shell ကို-ဖေါ်ပြခြင်းသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (Lammel et al ။ 2011) ။ ရှင်းနေသည်မှာ, ဤလေ့လာမှုများစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်နှစ်ဦးစလုံး opiates နှင့်အတူပေါ်ပေါက်သော Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏တစ်ဦးထက်ပိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်နားလည်မှုလေ့လာ DA အာရုံခံ၏ output အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ neuron- ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိကျသောနည်းစနစ် projection- ဒီသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဒေသတွင်း၌တိကျသောမော်ဂျူခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ဤကိစ္စရပ်များကိုရှင်းလင်းဖို့အစေခံပါလိမ့်မယ်။
Synaptic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုမှမူးယစ်သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity များ၏ဆက်စပ်မှု (မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်Russo et al ။ 2010). ယနေ့အထိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity အများစုဟာလေ့လာမှုများကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်သို့မဟုတ် VTA ပစ်မှတ်ဒေသများတွင်အာရုံခံ၏ dendritic အကိုင်းအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်း, VTA DA အာရုံခံဆဲလျ Soma အရွယ်အစားအနေနဲ့အပြောင်းအလဲတချို့နာတာရှည် opiate အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်၌အခြားသောအခြေခံအဆောက်အဦးလိုက်လျောညီထွေစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကြွက် VTA DA အာရုံခံဆဲလျမျက်နှာပြင်ဧရိယာနာတာရှည်တုံ့ပြန် ~25% လျော့နည်းစေကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့်စူးရှသောမ, မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေး (Sklair-Tavron et al ။ 1996). ဒီအကြိုးသကျရော VTA အတွက် DA အာရုံခံအဘို့တိကျတဲ့ခဲ့သည်, TH-အနုတ်လက္ခဏာဆဲလ် (ဖွယ်ရှိ GABAergic) ပြောင်းလဲမအဖြစ်။ ထို့အပြင် VTA ၌ဤပြောင်းလဲမှု Mor အချက်ပြလိုအပ်ခဲ့အကြံပြုခြင်း, စနစ်တကျ naltrexone ပိတ်ဆို့နှင့်ဒေသခံဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF) နိုင်ပြုတ်ရည်လည်းအချက်ပြသည့် morphological ပြောင်းလဲမှုအခြေခံဖြစ်နိုင်သည် neurotrophic လျော့နည်းသွားအကြံပြုသည်ကျဆင်းခြင်းတားဆီး။ အရေးကြီးတာက, VTA DA အာရုံခံဆဲလျ၌ဤလျှော့ချရေး Soma အရွယ်အစားနာတာရှည်ဘိန်းဖြူ၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ် (Russo et al ။ 2007), passive နှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေး protocols များအတွက် (Spiga et al ။ 2003; Chu et al ။ 2007; Russo et al ။ 2007), နှင့်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးကျနော်တို့လူ့ဘိန်းဖြူကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းမှ mouse ကိုနှင့် postmortem တစ်ရှူး၌ဤအကျိုးသက်ရောက်မကြာသေးမီကသွင်ပြင်လက္ခဏာအတိုင်း (Mazei-Robison et al ။ 2011). Follow-up, လေ့လာမှုများ VTA DA အာရုံခံသေခြင်းတရားသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာမျှသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရ (Sklair-Tavron et al ။ 1996; Russo et al ။ 2007) နှင့်ဆဲလ်အရွယ်အစားအတွက်ကျဆင်းခြင်းနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဆက်ရှိနေသေးပေမယ့် 30 ရက်ပေါင်းအားဖြင့်အခြေခံမှပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ဤအချိန်-line ကိုဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်ကိုထင်ဟပ် (Russo et al ။ 2007), မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထပ်ခါတလဲလဲသောလူသားမြားသညျတှငျတှေ့မွငျသကဲ့သို့, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှု၏တစ်ဦးတင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဦးဆောင် (O 'Brien 2001).
BDNF ဟာနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲကယ်ဆယ်နိုင်ပေးထားကျနော်တို့မြစ်အောက်ပိုင်း neurotrophic အချက်ပြလမ်းကြောင်းကဒီတည်ဆောက်ပုံ plasticity ကမကထပြုခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ချင်တယ်။ အချို့သောအငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိမရှိ BDNF အဆင့်ကဲ့သို့ရှိ၏ပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ (နာတာရှည် opiate အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန် VTA အတွက်ပြောင်းလဲနေကြသည်Numan et al ။ 1998; Chu et al ။ 2007; Koo et al ။ 2010PLCγ, phosphatidylinositol 3'-kinase (PI3K), နှင့် mitogen-activated ပရိုတိန်း kinase (MAPK) (:), စည်းမျဉ်း BDNF ကနေမြစ်အောက်ပိုင်းသုံးခုအဓိကအချက်ပြလမ်းကြောင်းအစီရင်ခံထားသည်Russo et al ။ 2009). အဆိုပါPLCγလမ်းကြောင်း၏နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်တိုးလှုပ်ရှားမှု (ဝံပုလွေ et al ။ 1999, 2007), အားဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, PI3K လမ်းကြောင်း၏လုပ်ဆောင်မှုလျော့ကျ (အင်ဆူလင်အဲဒီ receptor အလွှာ-2 (IRS2) နှင့် phospho-AKT အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့ဝံပုလွေ et al ။ 1999; Russo et al ။ 2007; Mazei-Robison et al ။ 2011), နှင့်တိုးမြှင့် phosphorylation နှင့် extracellular-related ပရိုတိန်း kinase (ERK ၏ catalytic လှုပ်ရှားမှုဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, MAPK အချက်ပြတိုးပွါး) (Ortiz et al ။ 1995; Berhow et al ။ 1996; လျူ et al ။ 2007). ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့က morphological ပြောင်းလဲမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်း PI3K အချက်ပြအတွင်းနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့: ရိုင်း-type အမျိုးအစား IRS2 ၏ overexpression တစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတက်ကြွ AKT (AKTca) တိုးမြှင့် Soma အရွယ်အစား၏မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ကျဆင်းခြင်းနှင့် overexpression တားဆီးနေစဉ်ကြီးစိုး-အနုတ်လက္ခဏာ IRS2 (IRS2dn) သို့မဟုတ် AKTdn ၏ overexpression, VTA DA Soma အရွယ်အစားကိုလျော့ချဖို့လုံလောက်ခဲ့တယ် (Russo et al ။ 2007; Mazei-Robison et al ။ 2011) ။ ဆနျ့ကငျြ, PLCγသို့မဟုတ် ERK ဖြစ်စေ၏ overexpression (VTA DA Soma အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့Russo et al ။ 2007). အရေးကြီးတာက, IRS2 ၏ overexpression အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦး plasticity များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ implicating လည်းမော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်တားဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာသေးမီအလုပ်ကဒီတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲရငျးနှီးနာတာရှည် opiates အားဖြင့်သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုကိုအပြောင်းအလဲများကိုချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဇော့ et al အားဖြင့်အတွင်း Vivo လေ့လာမှုဆင်တူ။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်, ငါတို့ VTA DA ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းမှာ Soma အရွယ်အစားနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့ကြွက်တွေမှာလျော့နည်းသွားသောမှာတစ်ချိန်တည်း-Point မှာတိုးပွားလာခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ (Mazei-Robison et al ။ 2011).
သို့သော်ကျနော်တို့ NAc မှ DA output ကိုတွေ့ရှိရသည့်အတွက် Vivo သိသိ voltammetry ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အမှန်တကယ် mesolimbic ဆုလာဘ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းသာမန် activation နှင့် output ကိုတစ်ဦးချိုးအကြံပြုခြင်း, လျော့နည်းသွားသည်။
ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဒီရလဒ်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် DA Soma အရွယ်အစားကိုလျော့ချဖို့လုံလောက်သောဖြစ်သော VTA အတွက် IRS2dn overexpression, NAc မှ DA output ကိုလျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိရလည်းအများအပြား K သည်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးလြော့နညျး+ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌ရုပ်သံလိုင်း subunits ။
အဆိုပါနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် neuroadaptations ဖျန်ဖြေကြောင်း IRS2 / AKT ကနေမြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြလမ်းကြောင်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ကျနော်တို့ rapamycin ၏နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေပစ်မှတ် (mTOR) ရှုပ်ထွေးသော 1 (mTORC1), ဆယ်လူလာဖွံ့ဖြိုးမှုမှာရေတွင်းတစ်တွင်း-ထူထောင်လမ်းကြောင်းအချက်ပြသောအံ့သြစရာလေ့လာရေးလုပ် အမှန်တကယ်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ငါတို့သည်ပြသနိုင်ဖို့သှားရသောအချက်ပြ mTOR ရှုပ်ထွေး2(mTORC2), တစ်ဦးကျဆင်းခြင်း Soma အရွယ်အစားနှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုထဲမှာမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်လေ့လာသည်။ အထူးသကျနော်တို့ mTOR (Rictor) ၏ rapamycin-အာရုံမခံစားနိုင်သောအဖော်, mTORC2 တစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းပရိုတိန်း၏ overexpression, Soma အရွယ်အစားအတွက်ကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောကြီးကိုလည်းဆဲလ်-ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလမ်းအတွက်နှုန်းကိုပစ်ခတ် DA အာရုံခံဆဲလျမှာရှိတဲ့တိုးတားဆီးတွေ့ရှိခဲ့: အနီးအနားမှာ DA ဆဲလ်နေဆဲတိုးပြသခဲ့သည်သော်လည်း Rictor overexpressed ကြောင်း VTA သာ DA ဆဲလ်တစ်ခု attenuation ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် DA အာရုံခံမှအခ်ါပြအပြောင်းအလဲများဖြစ်နိုင်ခြေဂါဘမြို့သား၏ AKT မော်ဂျူပြောင်းလဲအသုံးပြုပုံနာတာရှည် opiates အားဖြင့်သွေးဆောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပြောင်းအလဲများကိုဖျန်ဖြေနိုင်သောအကြံပြုA ရေစီးကြောင်း (Krishnan et al ။ 2008) သို့မဟုတ် K သည်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး+ လိုင်းများ (Mazei-Robison et al ။ 2011()သဖန်းသီး။ 3) ။ IRS2 overexpression နှင့်ဝသကဲ့သို့, ငါတို့တိုးပွားလာ mTORC2 လှုပ်ရှားမှုသွေးဆောင်တော်မမူကြောင်းမော်ဖင်းအကိုက်မယ့်အနိမ့်ထိုးဖို့ CPP ကသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်ခဲ့စဉ်မော်ဖင်းအကိုက် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ယုတ်လျော့ mTORC2 လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျလာအဖြစ်, မော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်အပြုအမူဆက်နွယ်နေကြောင်း mTORC2 လှုပ်ရှားမှုကြောင့်အပြောင်းအလဲတချို့တွေ့ရှိရ ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အေးစက်ထားပါ။
နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက် NAc မှ DA ဂီယာလျော့နည်းသွားနေစဉ် VTA DA Soma အရွယ်အစားသေး, အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားတိုးပွါးလျော့နည်းစေပါသည်။ မော်ဖင်းအကိုက်ပိုက်ကွန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုလိုသည်မှာသည်းခံဆုချတဲ့နည်းသောတုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ IRS2-AKT ၏စည်းမျဉ်း-down VTA အတွက် (အပြာ) အချက်ပြ Soma အရွယ်အစားနှင့်လျှပ်စစ်စိတ်လှုပ်ရှားအပေါ်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်၏သက်ရောက်မှု mediates; စိတ်လှုပ်ရှားအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသွားဂါဘမြို့သားများမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်A ရေစီးကြောင်းနှင့် K ၏ဖိနှိပ်မှု+ ရုပ်သံလိုင်းစကားရပ်။ မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ချ-စည်းမျဉ်း VTA အတွက် mTORC2 လှုပ်ရှားမှုဤမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် morphological နှင့်ဇီဝကမ္မအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဘို့အဖြစ်ဆုလာဘ်သည်းခံစိတ်များအတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ mTORC2 မတူဘဲ, နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်တိုက်ရိုက်ထိုအမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ပေါ်လာမ mTORC1 လှုပ်ရှားမှု (အနီ), တိုးပွားစေပါသည်။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်လည်း NAc မှ DA output ကိုလျော့ကျအဖြစ် dendritic အကိုင်းနှင့်အ NAc အတွက်အလတ်စား spiny ဂါဘမြို့သားအာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်လျော့ကျလာ, နောက်ထပ် mesolimbic ဆားကစ်အတွက်ပုံမှန် DA အချက်ပြနှိပ်ကွပ်။
ဒါဟာ Soma အရွယ်အစားအပြောင်းအလဲ VTA အတွက်နာတာရှည် opiates အားဖြင့်သွေးဆောင်တစ်ခုတည်းသောအခြေခံအဆောက်အဦးလိုက်လျောညီထွေကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့ကြွက်၏ NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏စိမျး၏လျော့နည်းသွား dendritic ကျောရိုးနံပါတ်နှင့် dendritic ရှုပ်ထွေး (ပေးထားRobinson နဲ့ Kolb 1999; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ 2002), ကျနော်တို့ dendritic အပြောင်းအလဲများကိုလည်း VTA DA အာရုံခံအတွက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောမျှော်လင့်ထား။ ယနေ့အထိတစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှု VTA dendritic ဗိသုကာအတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ထားပါတယ်အဖြစ်လက်ရှိလေ့လာမှုများ, ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အပြောင်းအလဲလယ်ပြင်၌ကြီးမားသောကွာဟမှုရဲ့အနှစ်သာရကမှဆဲဖြစ်ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုက (တူညီမျိုးကွဲတိုးလာ NMDA / AMPA အချိုးကိုပြပြတစ်ဦးစူးရှသောကိုကင်းဆေးထိုးဖို့တုန့်ပြန် VTA အာရုံခံဆဲလျတစျခုမျိုးကွဲအတွက် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတစ်ခုတိုးလာတွေ့ရှိရSarti et al ။ 2007) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အလုပ်ကနေဒေတာ, VTA DA ဖြစ်စဉ်များ၏အရှည် (နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်နဲ့ကုသကြွက်များတွင် (~30%) ယုတ်လျော့နေသည်Sklair-Tavron et al ။ 1996), VTA DA ဗိသုကာအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုလည်းငါတို့ယခင်ကအစီရင်ခံသည်အတိုင်းနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ပြီးနောက် NAc မှ DA output ကိုအတွက်လျော့နည်းသွားရှင်းပြဖို့ကူညီနိုင် (VTA အတွက် axon သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် neurofilament ပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့Beitner-ဂျွန်ဆင် et al ။ 1992, 1993), နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်လည်း axon ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုထိခိုက်စေသောအကြံပြုခြင်း။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် VTA DA အာရုံခံအတွက်ဒေသဆိုင်ရာနှင့်စီမံကိန်းရှုပ်ထွေးပေးထားကျနော်တို့လက်ရှိသည်ဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုချောင်း retrograde tracers သုံးပြီး VTA DA အာရုံခံတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အစိတ်အပိုင်းအစုထဲမှာသွေးဆောင်ရှိမရှိဆန်းစစ်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာနာတာရှည် opiates နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်သက်ဆိုင်ရာ output ကိုဆားကစ်များကသွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် electrophysiological အပြောင်းအလဲများကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အရေးပါဖြစ်လိမ့်မည်။
အစောပိုင်းကသွယ်ဝိုက်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းမော်လီကျူးများနှင့် electrophysiological နှစ်ဦးစလုံးပေါင်းများစွာလေ့လာမှုများ, နာတာရှည် opiate အုပ်ချုပ်ရေးကို (VTA အတွက်စခန်း-CREB လမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးBonci နှင့်ဝီလျံ 1997; Olson et al ။ 2005; Madhavan et al ။ 2010) ။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦး microarray လေ့လာမှု (နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်တုံ့ပြန် VTA အတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဗီဇစကားရပ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုသတ်မှတ်McClung et al ။ 2005) ။ အလုပ်ယခုပိုကောင်းသည်ဤ neuroadaptations ၏ဆယ်လူလာတိကျတဲ့သတ်မှတ်အဖြစ်၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ delineate ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ VTA အပေါ်အများဆုံးအလုပ် DA အာရုံခံအတွက်ပေါ်ပေါက်ဖို့ယူဆ opiate-သွေးဆောင် neuroadaptations အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်စဉ်ထို့အပြင်, အထဲတွင် opiate အရေးယူမှု၏တံခါးသော့ကိုကနဦးပစ်မှတ်၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ရာ, ထို VTA ရဲ့ GABAergic အာရုံခံထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် plasticity စူးစမ်းဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ် ဒီဦးနှောက်ဒေသ။
အဆိုပါ LC (ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံခံ -containing norepinephrine (NE) ၏အဓိက site ကိုဖြစ်ပါတယ်Dahlstrom နှင့် Fuxe 1965) ။ ယခင်ကပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ် (Aston-ဂျုံးစ်နှင့် Bloom 1981a; Aston-ဂျုံးစ် et al ။ 1991b; Berridge နှင့် Waterhouse 2003; ဗန် Bockstaele et al ။ 2010), LC နီးပါးသီးသန့် NE အာရုံခံပါဝင်သည်ဟုတစ် discrete, ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနျူကလိယသည်။ LC ဖို့အဓိကသွင်းအားစုအတွက် medullary နျူကလိယ paragigantocellularis (PGi) နှင့်နျူကလိယ prepositus hypoglossus ထံမှဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, LC လက်ငင်း forebrain, cerebellum, brainstem နှင့်ကျောရိုး (အပါအဝင်ကျယ်ပြန့်များမှာသဖန်းသီး။ 1()Berridge နှင့် Waterhouse 2003) ။ LC အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု (နှစ်ဦးစလုံး Basal နှင့်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အလွန်အမင်း synchronous ဖြစ်ပါသည်ခြေလျင် et al ။ 1980; Aston-ဂျုံးစ်နှင့် Bloom 1981b; Aston-ဂျုံးစ် et al ။ 1991a; Ishimatsu နှင့်ဝီလျံ 1996) ။ LC အာရုံခံ (ကောက်ကာငင်ကာတက်ကြွနေကြသည်Williams က et al ။ 1991) နှင့်၎င်းတို့၏ activation cortex နဲ့ hippocampus အပါအဝင်အများအပြား forebrain ဒေသများတွင် NE လွှတ်ပေးရန် elicits ။ ကန့်သတ် Synaptic plasticity ယနေ့အထိမှတ်ချက်ချနှင့်အတူအချိုမှု afferents LC လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ပေမယ့်အဆိုပါ LC အကြီးအကျယ် (အထူးသ PGi ကနေ, ထပ်ဆင့်လွှင်နျူကလိယအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်Ennis et al ။ 1992) ။ အဆိုပါ VTA နှင့်ဝသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေးနွေးမှုအများဆုံးတိုက်ရိုက် opiate မှီခိုနှင့်စွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော Mor, ကန့်သတ်ထားသည်ဖြစ်သော်လည်းကွဲပြားဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူ Mor, ဒေါနှင့် KOR: LC အာရုံခံ opioid receptors ၏သုံးခုအဓိကအတန်းကိုဖော်ပြ။
LC အတွက်ရိုးရာ Synaptic plasticity (ဆိုလိုသည်မှာ LTP နှင့်, LTD) ၏အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်, ကောင်းစွာ-ဖော်ပြထားဆယ်လူလာ plasticity ရှိသေး၏။ LC တစ်မူထူးခြားတဲ့ feature ကိုနာတာရှည် opiates ရန်၎င်း၏အတွက် Vivo တုံ့ပြန်မှုများစွာကို Single-ဆဲလ်အဆင့်ကို (အနည်းဆုံး recapitulated နှင့်လေ့လာနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျNestler et al ။ 1994; Nestler နှင့် Aghajanian 1997; Nestler 2004) ။ အဆိုပါ Mor မှ opiates (ဥပမာ, မော်ဖင်းအကိုက်) ၏ binding adenylyl cyclase (AC) လှုပ်ရှားမှုနဲ့စခန်းအချက်ပြ (လျော့နည်းသွားစေပါတယ်Duman et al ။ 1988) ။ acute အဆိုပါ Mor မှ opiates ၏ binding ကိုလည်းအကြီးအကျယ်က G ပရိုတိန်း-န့်သတ်ထားထားပြီးအတွင်းပိုင်း-rectifying K သည်ကိုသက်ဝင်အသုံးပြုပုံ LC အာရုံခံ၏ pacemaker လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျ+ (GIRK) ချန်နယ်များကို (Williams က et al ။ 1982; Torrecilla et al ။ 2002) ။ သို့သျောလညျး, (သည်းခံစိတ်သရုပ်ဖော်, အပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းနှင့်စခန်းနှစ်ခုလုံးကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စခန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုတက်-စည်းမျဉ်း၏အခြေခံမှပြန်လာပြ, နာတာရှည် opiate အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူAghajanian 1978; Duman et al ။ 1988; Nestler နှင့် Tallman 1988; Guitart နှင့် Nestler 1989; Kogan et al ။ 1992; Ivanov နှင့် Aston-ဂျုံးစ် 2001) ။ နာတာရှည် opiate အုပ်ချုပ်ရေး (up-စည်းမျဉ်းဆိုလိုသည်မှာစခန်းလမ်းကြောင်း) ကသွေးဆောင်ဒါက plasticity LC အာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းသိသိသာသာမှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာ (သရုပ်ဖော်, စခန်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကြီးမားသောတိုးနှင့်အတူတိုးပွါးသောအခါ, opiate ၏ရုပ်သိမ်းရေးအပေါ် function ထင်ရှားဖြစ်လာသဖန်းသီး။ 4()Aghajanian 1978; Rasmussen et al ။ 1990).
up-စည်းမျဉ်း opiate သည်းခံစိတ်နဲ့မှီခိုနေတဲ့ယန္တရားအဖြစ် LC အတွက်စခန်းလမ်းကြောင်း၏။ ထိပ်တန်း panel က, Opiates acute (Camp ၏ဆယ်လူလာအဆင့်ဆင့်နှင့်စခန်း-မှီခိုပရိုတိန်း phosphorylation အားဖြင့်ညွှန်ပြ) ကိုစခန်းလမ်းကြောင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတားစီး။ ဆက်လက် opiate ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ, တပ်လမ်းကြောင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်သက်သာ, နဲ့ (opioid အဲဒီ receptor ရန် naloxone ၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ဥပမာ) အ opiate ၏ဖယ်ရှားရေးအောက်ပါဝေးထိန်းချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်အထက်တိုး။ တပ်ကိုလမ်းကြောင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့ပြည်နယ်တွင်ဤအပြောင်းအလဲများကို opiates ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန် adenylyl cyclases (AC) ၏သော induction နှင့်ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) ကနေတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ဤအအင်ဇိုင်းတွေ၏ induction နာတာရှည် opiate ထိတွေ့မှု (သည်းခံစိတ်နှင့်မှီခို) နှင့် opiate ၏ဖယ်ရှားရေး (ရုပ်သိမ်းရေး) အပေါ်ရှုလေ့လာသည်တပ်လမ်းကြောင်း၏အသက်သွင်းနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစခန်းလမ်းကြောင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်နာလန်ထူတွက်သည်။ အောကျခွေ panel က, Opiates acute တစ်ခုအတွင်း၌ rectifying K သည်၏အကငျြ့ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် LC အာရုံခံတားစီး+ , G ၏ Subtype နှင့်အတူနားချင်းဆက်မှီမှတဆင့်ရုပ်သံလိုင်းI / O နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်တစ် Na လျော့ကျလာခြင်းဖြင့်+, G နှင့်အတူနားချင်းဆက်မှီမှတဆင့်လက်ရှိအတွင်း -dependentI / O နှင့် AC ၏နောက်ဆက်တွဲတားစီး, PKA လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်လျှော့ချလျက်, ချန်နယ်သို့မဟုတ်တာဝန်ရှိစုပ်စက်၏ phosphorylation လျှော့ချ။ တပ်ကိုလမ်းကြောင်း၏တားစီးလည်းများစွာသောအခြားပရိုတိန်း၏ phosphorylation လျော့ကျခြင်းနှင့်, အားဖြင့်, မြောက်မြားစွာနဲ့အခြားအာရုံကြောဆဲလ်ဖြစ်စဉ်များသာသက်ရောက်သည်။ ဥပမာ, LC function ကိုအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများအချို့စတင်ရာစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း (CREB) ၏ phosphorylation ပြည်နယ်လျော့နည်းစေသည်။ မော်ဖင်းအကိုက်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး ACI, ACVIII, PKA catalytic ၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွါး (ကြောင်။ ) နှင့်စည်းမျဉ်း subunits နှင့် CREB နှင့် (အနီရောင်မြှားခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြ) tyrosine hydroxylase (TH) အပါအဝင်အများအပြား phosphoproteins ။ ဤပြောင်းလဲမှုများမူးယစ်ဆေး-စွဲပြည်နယ်၏ပြောင်းလဲ phenotype မှကူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, LC အာရုံခံ၏အခ်ါစိတ်လှုပ်ရှားတပ်ကိုလမ်းကြောင်းနှင့် Na ၏တိုးမြှင်လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်တိုးပွါး+အဆိုပါသည်းခံစိတ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ထားတဲ့လက်ရှိ, မှီခိုနှင့်ဆုတ်ခွာအတွင်း -dependent သည်ဤအာရုံခံအားဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ up-စည်းမျဉ်း ACVIII နှင့် TH ၏ CREB မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့သည် ACI ၏စည်းမျဉ်း-Up နှင့် PKA subunits ၏သော်လည်းအမည်မသိ, CREB-လွတ်လပ်သောယန္တရားကနေတစ်ဆင့်ပေါ်ပေါက်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် AC1 / 8 (အပါအဝင်စခန်းလမ်းကြောင်းထဲမှာအများအပြားအချက်ပြပရိုတိန်း၏တက်-စည်းမျဉ်းကနေတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်Matsuoka et al ။ 1994; ယာဉ်ကြော-Ladd et al ။ 1997; Zachary et al ။ 2008), Camp-မှီခိုပရိုတိန်း kinase (PKA) (Nestler နှင့် Tallman 1988), CREBGuitart et al ။ 1992; Shaw-Lutchman et al ။ 2002; ဟန် et al ။ 2006), နှင့် TH နှင့် BDNF-နှစ်ဦးစလုံးမြစ်အောက်ပိုင်း CREB ပစ်မှတ် (Guitart et al ။ 1989; Akbarian et al ။ 2002) ။ နာတာရှည် opiates လည်း (LC အတွက် GIRK2 /3စကားရပ်သွေးဆောင်Cruz et al ။ 2008) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်မြောက်မြားစွာကိုအခြားမျိုးဗီဇ (McClung et al ။ 2005) ။ ထို့အပွငျကမကြာသေးမီကတစ်ခုအခ်ါ homeostatic လိုက်လျောညီထွေ (implicating, နာတာရှည် opiates အားဖြင့်သွေးဆောင် LC အာရုံခံ၏တိုးမြှင့်အခ်ါလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု LC NE အာရုံခံအပေါ် Mor ၏တိုက်ရိုက် activation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်း, တစ်ဦး LC အချပ်ယဉ်ကျေးမှုပုံစံကို အသုံးပြု. ပြသခဲ့ပြီးCao et al ။ 2010) ။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မှု (နှုန်းကိုပစ်ခတ်နေ pacemaker လှုပ်ရှားမှုနဲ့ LC အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်တိုးနှစ်ဦးစလုံးအတွက် CREB များအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍဖော်ထုတ်ဟန် et al ။ 2006; Cao et al ။ 2010NE အာရုံခံမှတိကျတဲ့ CREB ၏အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကောက်တို့နှင့်လည်းကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့), တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှု (Parlato et al ။ 2010) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ LC အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်, နှင့်တိုးမြှင့ပစ်ခတ်ရန် mediates သောတက်-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Camp-CREB လမ်းကြောင်း, ၏ဤ activation (လိုအပ်သောနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ opiate ဆုတ်ခွာအတော်ကြာရောဂါလက္ခဏာတွေပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများမှာပြခဲ့ကြယာဉ်ကြော-Ladd et al ။ 1997; et al လာကြတယ်။ 1997; ဟန် et al ။ 2006).
ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့ opiate-သွေးဆောင် plasticity အများစု LC NE အာရုံခံမှအခ်ါဖြစ် postulated ပေမဲ့, မော်ဖင်းအကိုက်-ကုသကြွက်တွေကနေအချပ်များတွင်အလိုအလျောက် EPSC ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုတိုးလည်းမရှိအဖြစ်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက် LC မှ excitatory input ကိုလည်းသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သောအချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (Torrecilla et al ။ 2008) ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးမော်ဖင်းအကိုက်-ဆုတ်ခွာကြွက်များတွင် Vivo အတွက် LC အတွက်အချိုမှုများနှင့် aspartate လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးနှင့် LC အတွက် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်ရန်ဒေသခံ application ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလုပ်ကွက် (LC လှုပ်ရှားမှုအတွင်းဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုးလည်းမရှိAkaoka နှင့် Aston-ဂျုံးစ် 1991; Aghajanian et al ။ 1994).
တချို့ကအငြင်းပွားဖွယ်ရာ LC အာရုံခံနှင့် LC အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအတွင်းစခန်း-CREB အချက်ပြအတွင်းအပြောင်းအလဲများကို opiate ဆုတ်ခွာအပြုအမူတွေကိုဖျန်ဖြေခြင်းရှိမရှိအဖြစ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, LC ၏တွေ့ရှိရပါသည်, ဒါမှမဟုတ် LC NE အာရုံခံအတွက် CREB လှုပ်ရှားမှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနောက်ကောက်, (detect ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေပြောင်းလဲပစ်ရန်ပျက်ကွက်ခရစ် et al ။ 1997; Parlato et al ။ 2010) ။ ဆနျ့ကငျြ, ကျနော်တို့ (တသမတ်တည်းလုပ်ကွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိရစ္ဆာန်များ၏ LC အတွက်အများအပြားရုပ်သိမ်းအပြုအမူတွေတပ်ကိုလမ်းကြောင်း၏လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် CREB ၏မော်ဂျူပြခဲ့ကြယာဉ်ကြော-Ladd et al ။ 1997; et al လာကြတယ်။ 1997; ဟန် et al ။ 2006) ။ ကျနော်တို့တော်တော်များများ key ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဤမတူညီသောတွေ့ရှိချက်ကိုရှင်းပြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ပထမဦးစွာ LC (ကိုယ့်တဦးတည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ opiate မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာများအတွက်အရေးကြီးသောအများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာဖြစ်ပါသည်Koob နှင့် Le Moal 2001) ။ ဒါဟာကိုတွေ့ရှိရပါသည် LCs နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များယခုထိဒီသည်အခြားအာရုံကြောအလွှာအပေါ်တိုးမြှင့်မှီခိုကကမကထပြုခဲ့လေးနက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုဖွံ့ဖြိုးကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒုတိယအချက်မှာက LC အတွက်စခန်းလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှု manipulate ဖို့အသုံးပြုတဲ့ tools အချို့ဤဒေသတွင် (ဥပမာ, PKA Active သို့မဟုတ် inhibitors ၏ဒေသခံပြုတ်ရည်) သြဇာလွှမ်းမိုးမှု glutamatergic afferents ကိုလည်းစခန်းလမ်းကြောင်းအပါအဝင်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကို (ပြသရန်ပေါ်လာသောအရာသည်အလွန်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် up- နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ပြီးနောက်စည်းမျဉ်း) (Nestler 1992; ခရစ် et al ။ 1997) ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (afferent အာရုံကြောဆိပ်ကမ်းမထိခိုက်နိုင်သည့်) ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူ LC ထံမှ CREB ၏ဒေသခံနောက်ကောက်လုပ်ကွက်သည့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်တိုးချဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတတိယ, ဤ glutamatergic afferents များအတွက်ဖွယ်ရှိအခန်းကဏ္ဍရှိနေသော်လည်း LC NE အာရုံခံမှအခ်ါ plasticity လည်းပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းမျှမေးစရာရှိပါတယ် (LC NE အာရုံခံနှင့်ဆုတ်ခွာ attenuatesCao et al ။ 2010; V ကို Zachary နှင့် EJ Nestler, unpubl ။ ) ။ ခြွင်းချက်နောက်ကောက်ကြွက်များတွင်ဤအာရုံခံထံမှ CREB နောက်ကောက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း (Parlato et al ။ 2010) အစောပိုင်းနောက်ကောက်မော်ဒယ်များ၏အသုံးပြုမှုကိုရှုပ်ထွေးသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလျော်ကြေးငွေကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ plasticity လေ့လာနေသည့်အခါအပြည့်အဝထူးခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်ထဲမှာမျိုးဗီဇထိန်းသိမ်းရေးသုံးပြီး၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးသည်။
ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုဥစ္စာဓန opiate ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် LC NE အာရုံခံအတွက်အခ်ါ homeostatic plasticity တစ်ယန္တရားအဖြစ်တက်-စည်းမျဉ်းသည်တပ်-CREB လမ်းကြောင်း၏တည်စေ။ ဒါကြောင့်ဦးနှောက်အပေါ် opiates ၏ရေရှည်လုပ်ရပ်များများအတွက်မော်ဒယ် system အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အဖြစ်က LC ပေါ်မှာဤအလုပ်၏သမိုင်းဝင်အရေးပါမှုကိုအလေးပေးဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်: LC ဤအစောပိုင်းကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီး, ထ-စည်းမျဉ်းသည်တပ်-CREB ၏ လမ်းကြောင်းကတည်းက opiate သည်းခံစိတ်, မှီခိုနှင့်ဗဟိုနှင့်အရံအာရုံကြောစနစ်များမြောက်မြားစွာဒေသများတွင်ဆုတ်ခွာတစ်ဘုံယန္တရားဖြစ်ပြခြင်းနှင့်အမှန်ပင် (မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးအခြေခံအကောင်းဆုံးထူထောင်မော်ဒယ်များများထဲမှကိုယ်စားပြုထားသည်Nestler 2001, 2004).
ယနေ့အထိ, နာတာရှည် opiate အုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် LC အာရုံခံအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦး plasticity ၏ဖော်ပြချက်ပေးခြင်းမရှိပေ။ ကျနော်တို့လက်ရှိကိုမဆို Soma အရွယ်အစားအပြောင်းအလဲများကို VTA အတွက် DA အာရုံခံလေ့လာပြောင်းလဲမှုများမှအလားတူသောဤအာရုံခံအတွက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်နေကြ။ သို့သော်သက်သေအထောက်အထားနှစ်ခုလိုင်းများပြောင်းလဲမှု၏ဤအမျိုးအစား LC အတွက်သက်ဆိုင်ရာမကျမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာပုံမှန် axon သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် neurofilament ပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့် (VTA မတူဘဲအတွက်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ပြီးနောက် LC အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်Beitner-ဂျွန်ဆင် et al ။ 1992; Beitner-ဂျွန်ဆင်နှင့် Nestler 1993), အာရုံခံဖွဲ့စည်းပုံ၏ trophic ထောက်ခံမှုထိခိုက်မရစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ ဒုတိယအချက်, Soma အရွယ်အစားပြောင်းလဲအဓိကပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ် LC အတွက်ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများ၏ opiate စည်းမျဉ်းများအကြားခြားနားချက်များနှင့် VTA အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းတိုးပွားလာသောငါတို့တွေ့ရှိချက်ပေးတော်မူ၏။ အမည်, VTA အတွက် opiates နာတာရှည်ချပ်နှင့် Vivo အတွက်နှုန်းကိုပစ်ခတ်တိုးမြှင့်, ကြှနျုပျတို့မှုနှုန်းပစ်ခတ်၌ဤတိုး၏အကျိုးဆက်နှင့်အဖြစ်လျော့နည်းသွားဆဲလ်အရွယ်အစားတော့သည်စောငျ့ရှောကျ။ ဒီအတိုးလာနှုန်း opiate ကနေဆုတ်ခွာတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, ထို့နောက်ပုံမှန်, ဒါမှမဟုတ်ပင်အခြေခံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလျော့နည်းစေပါသည်။ သက်သေအထောက်အထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အနေဖြင့်လည်းမရှိသောကြောင့် (Russo et al ။ 2007), နှင့်အခြားသူများ (Spiga et al ။ 2003အဆိုပါ Soma အရွယ်အစားကိုလည်းထိုအနောက်ပိုင်းတွင်အချိန်-အချက်များမှာလျော့နည်းသွားကြောင်းပစ်ခတ်မှုနှုန်းလျော့နည်းသွားခဲ့ပါသည်အခါ), က morphological ပြောင်းလဲမှုသော induction သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အရေးပါသောအကြောင်းပစ်ခတ်ရန်နှုန်းသည်အတွက်ကနဦးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ဆနျ့ကငျြ, LC အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု acute မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ယုတ်လျော့သည်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ Vivo အတွက်အခြေခံအဆင့်ဆင့်ဆီသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ, သာ opiate ရုပ်သိမ်းရေးအပေါ်သာမန်အဆင့်ဆင့်အထက်တိုးပွားစေပါသည်။ (ဤအတွက် Vivo လေ့လာတွေ့ရှိချက် [ဆုတ်ခွာမရှိပဲ, နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်-ကုသ [မှီခို] ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတိုးမြှင့်ဖွင့်-စည်းမျဉ်းမှုနှုန်းနှင့်စခန်း-CREB လမ်းကြောင်းပစ်ခတ်သော, ဦးနှောက်အချပ်ယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောအရာကိုကှာခွားCao et al ။ 2010] ။ ) ဤထည့်သွင်းစဉ်းစားနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်သော်လည်း, Vivo အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်တန်ခိုးကနေဆုတ်ခွာ LC အာရုံခံအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦး plasticity အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုထုတ်ယူမပြုစေခြင်းငှါ, ထိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ (ဒီစိတ်ကူးကိုထောက်ခံကြောင်း, LC ကျွန်တော်တို့ရဲ့ microarray လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုဆဲလ်ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်အများအပြားဗီဇနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူလျော့နည်းသွားသို့မဟုတ်မပြောင်းလဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပေမယ့်ဆုတ်ခွာနှင့်အတူတိုးပွားလာကြသည်McClung et al ။ 2005) ။ ဒါဟာ (LC NE အာရုံခံထံမှအစောပိုင်း CREB နောက်ကောက်အာရုံခံအရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူးအဖြစ် LC အာရုံခံ၏ Basal ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းအတွက်တာရှညျလျှောက်လျော့နည်း, Soma အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းလူသိများပေမယ့် Basal လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်Parlato et al ။ 2010) ။ ကျွန်တော်တစ်ဦး K သည် overexpressed ရသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ငါတို့သည်လည်း VTA DA Soma အရွယ်အစားအတွက်ခြားနားချက် detect မပြုခဲ့+ ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းကိုလျော့ချဖို့ချန်နယ် (Mazei-Robison et al ။ 2011), အ Parlato et al ဒါ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ချေထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ သို့တိုင်, ကဂါဘမြို့သား, နှစ်ခုဦးနှောက်ဒေသများအကြားနှုန်းကိုပစ်ခတ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖြန်ဖြေသည့်ယန္တရား AKT အချက်ပြပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူအလွန်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်A ရေစီးကြောင်းများနှင့် K သည်+ ရုပ်သံလိုင်းစကားရပ် VTA ်ပတ်သက်နေနှင့်စခန်း-CREB LC ်ပတ်သက်နေအချက်ပြ။
အတူတူ, VTA နှင့် LC ကနေဒေတာတွေကိုဆယ်လူလာ Synaptic အတွက်ရှုပ်ထွေးပြီးအရေးကြီးသောအပြောင်းအလဲ, ဤဒေသများအတွက်ဦးနှောက်ရဲ့ catecholamines အာရုံခံနှင့်အခြားအာရုံခံအမျိုးအစားများအပေါ် opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖျန်ဖြေတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity, အရာအလှည့်များတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့်မှီခိုသရုပျဖျော ။ နှစ်ဦးစလုံးဒေသများတွင်စူးရှ opiate အရေးယူမှုနှင့် LC အတွက်နာတာရှည် opiate အရေးယူအခြေခံသော plasticity, မျှမျှတတကောင်းစွာစရိုက်လက္ခဏာတွေဖြစ်သော်လည်းအနာဂတ်လေ့လာမှုများမျိုးစုံဆဲလ်အမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးမြင်ကြကွဲပြားမှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူ VTA အတွက်နာတာရှည် opiate အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်သော plasticity delineate ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် မျိုးစုံ input ကို-output ကိုပုံစံများကိုဖြတ်ပြီးပင်တစ်ခုတည်းကလာပ်စည်းအမျိုးအစားပါ။ ထိုသို့သောတိုးတက်မှု opiates ဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆုံးတွင်စွဲထိန်းချုပ်ဖို့ဒီဦးနှောက်ဒေသအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သော VTA အတွက် opiates အားဖြင့်သွေးဆောင်ဟာကြာရှည်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏နားလည်မှုနှင့် LC opiate မှီခိုနှင့်စွဲလမ်း၏ etiology ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာမသာတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဝတ္ထုကုထုံးကြားဝင် elucidate ကူညီပေးပါမည်။
ကျနော်တို့အနုပညာအကူအညီအတွက် AJ Robison နှင့်ဂျက်စီကာ Ables ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
မူပိုင်ခွင့်© 2012 အေးနွေဆိပ်ကမ်းဓာတ်ခွဲခန်းစာနယ်ဇင်း; မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
Aghajanian GK ။ 1978 ။ clonidine အားဖြင့်ဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှုမော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ဖိနှိပ်မှုမှ locus coeruleus အာရုံခံ၏သည်းခံစိတ်။ သဘာဝ 276: 186-188 ။
Aghajanian GK, Kogan JH, Moghaddam ခ 1994 ။ Opiate ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် locus coeruleus အတွက်အချိုမှုများနှင့် aspartate efflux တိုးပွါး: တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res 636: 126-130 ။
Akaoka H ကို, Aston-ဂျုံးစ် G. အ 1991 ။ locus coeruleus အာရုံခံ၏ Opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် hyperactivity သိသိသာသာတိုးပွား excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် input ကိုကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ J ကို neuroscience 11: 3830-3839 ။
Akbarian S က, Rios M က, လျူ RJ, et al ရွှေ SJ, Fong သည် HF, Zeiler S က, Coppola V ကို, Tessarollo L ကို, ဂျုံးစ် KR, Nestler EJ ။ 2002 ။ ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် noradrenergic အာရုံခံ၏ opiate-သွေးဆောင် plasticity များအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ J ကို neuroscience 22: 4153-4162 ။
Aston-ဂျုံးစ်, G, Bloom FE ။ 1981a ။ ကြွက်ပြုမူအတွက် norepinephrine ပါဝင်သော locus coeruleus အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဟာအိပ်စက်ခြင်း-နှိုးသံသရာအတွက်အတက်အကျမျှော်လင့်ထားသည်။ J ကို neuroscience 1: 876-886 ။
Aston-ဂျုံးစ်, G, Bloom FE ။ 1981b ။ ကြွက်ပြပွဲပြုမူအတွက် Norepinephrine ပါဝင်သော locus coeruleus အာရုံခံ Non-noxious သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုအသံထှကျ။ J ကို neuroscience 1: 887-900 ။
Aston-ဂျုံးစ်, G, ချင်းမိုင်ကို C, Alexinsky တီ 1991a ။ ကြွက်များနှင့်မျောက်များပြုမူအတွက် noradrenergic locus coeruleus အာရုံခံ၏ဥတုသတိဝီရိယတစ်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုထားသည်။ prog ဦးနှောက် Res 88: 501-520 ။
Aston-ဂျုံးစ်, G, Shipley MT, Chouvet, G, Ennis M က, ဗန် Bockstaele အီး, Pieribone V ကို, et al Shiekhattar R ကို, Akaoka H ကို, Drolet, G, Astier B က။ 1991b ။ locus coeruleus အာရုံခံ၏ Afferent စည်းမျဉ်း: ခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ prog ဦးနှောက် Res 88: 47-75 ။
Ballantyne JC, LaForge KS ။ 2007 ။ နာတာရှည်နာကျင်မှု opioid ကုသမှုစဉ်အတွင်း Opioid မှီခိုနှင့်စွဲလမ်း။ နာခြင်း 129: 235-255 ။
Beitner-Johnson က D:, Nestler EJ ။ 1993 ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကြွက် mesolimbic dopamine စနစ် axoplasmic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးချို့ယွင်း။ Neuroreport 5: 57-60 ။
Beitner-Johnson က D:, Guitart X ကို, Nestler EJ ။ 1992 ။ Neurofilament ပရိုတိန်းနှင့် mesolimbic dopamine စနစ်က: ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်ကင်းခြင်းဖြင့်တူညီသည့်အစည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience 12: 2165-2176 ။
Berhow MT, Hiroi N ကို, Nestler EJ ။ 1996 ။ မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်ကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်ကြွက် mesolimbic dopamine စနစ် ERK ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေ (extracellular signal ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kinase), အ neurotrophin signal ကို transduction အဆငျ့ဆငျ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ J ကို neuroscience 16: 4707-4715 ။
Berridge CW, Waterhouse bd ။ 2003 ။ အဆိုပါ locus coeruleus-noradrenergic system ကို: အမူအကျင့်ပြည်နယ်၏ Modulation နှင့်ပြည်နယ်မှီခိုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗြာ 42: 33-84 ။
Bolanos, CA, Perrotti LI, Edwards က S နဲ့, Eisch AJ, Barrot M က, Olson VG, စယ် DS, Neve RL, Nestler EJ ။ 2003 ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏ကွဲပြားဒေသများတွင် phospholipase Cgamma differential စိတ်ဓါတ်များ-related အပြုအမူတွေ modulates ။ J ကို neuroscience 23: 7569-7576 ။
Bonci တစ်ဦးက, Williams က JT ။ 1997 ။ မော်ဖင်းအကိုက်ထံမှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရေးတိုးမြှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ J ကို neuroscience 17: 796-803 ။
ဘရောင်း MT, Bellone ကို C, Mameli M က, Labouebe, G, Bocklisch ကို C, Balland B, Dahan L ကို, Lujan R ကို, Deisseroth K ကို Luscher C. 2010 ။ ရွေးချယ် dopamine အာရုံခံဆဲလျဆွခြင်းဖြင့် mimicked မူးယစ်ဆေး-မောင်းနှင် AMPA အဲဒီ receptor ပြန်လည်ခွဲဝေမှု။ PLoS ONE 5: e15870 ။
Cao JL, Vialou, VF, Lobo MK, Robison AJ, Neve RL, Cooper က, DC, Nestler EJ, ဟန် MH ။ 2010 ။ locus coeruleus အာရုံခံ၏ opiate-သွေးဆောင် homeostatic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်အတွက်စခန်း-Camp တုံ့ပြန်မှု-ဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်းလမ်းကြောင်း၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ proc Natl Acad သိပ္ပံ 107: 17011-17016 ။
Carlezon WA ဂျူနီယာ Boundy VA သို့, မိုးသီး CN, ယာဉ်ကြော SB, Kalb RG, Neve RL, Nestler EJ ။ 1997 ။ ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်မော်ဖင်းအကိုက်ထိခိုက်မခံတဲ့။ သိပ္ပံ 277: 812-814 ။
Carlezon WA ဂျူနီယာ, မိုးသီး CN, ဒြု R ကို, Hayashi Y ကို, Malinow R ကို, Neve RL, Nestler EJ ။ 2000 ။ အဆိုပါ midbrain အတွင်း opiate ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ကွဲပြားက်ဘ်ဆိုက်များ GluR1 ဖော်ပြနေတဲ့ရေယုန် simplex virus ကိုအားနည်းချက်ကိုသုံးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ J ကို neuroscience 20: RC62 ။
Chen က BT, Bower က MS, မာတင် M က, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Guillory လေး, Carelli RM, Chou JK, Bonci အေ 2008 ။ ကိုကင်းပေမယ့်သဘာဝကဆုလာဘ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်သလို passive ကင်းပြုတ်ရည်ဟာ VTA အတွက်မြဲ LTP ထုတ်လုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အာရုံခံဆဲလျ 59: 288-297 ။
ခရစ် MJ, Williams က JT, Osborne PB, Bellchambers အီး။ 1997 ။ opioid ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် locus အဘယ်မှာရှိသနည်း ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ 18: 134-140 ။
Chu NN, Zuo YF, Meng L ကို, Lee က Dy, ဟန် JS, Cui CL ။ 2007 ။ Peripheral လျှပ်စစ်ဆွဆဲလ်အရွယ်အစားလျှော့ချရေးပြောင်းပြန်နှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်-ကုသကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၌ BDNF အဆင့်အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဦးနှောက် Res 1182C: 90-98 ။
Compton WM, Volkow ND ။ 2006 ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ opioid analgesic အလွဲသုံးစားမှုများတွင်ဗိုလ်မှူးတိုး: စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်မဟာဗျူဟာ။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ 81: 103-107 ။
Cruz HG, Berton က F, Sollini M က, Blanchet ကို C, Pravetoni M က, Wickman K ကို Luscher C. 2008 ။ GIRK / Kir3 အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏မရှိခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးခေါက်ထွက်ကြွက်။ J ကို neuroscience 28: 4069-4077 ။
Dacher M က, Nugent FS ။ 2011a ။ GABAergic မှာ, LTD ၏မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်မော်ဂျူပု ventral tegmental ဧရိယာ၌ synapses ။ Neuropharmacology 61: 1166-1171 ။
Dacher M က, Nugent FS ။ 2011b ။ Opiates နှင့် plasticity ။ Neuropharmacology 61: 1088-1096 ။
Dahlstrom တစ်ဦးက, Fuxe K. 1965 ။ ကြွက်ကျောရိုး၏ ventral အမြစ်များအတွက် noradrenaline အာရုံကြောအမျှင်တစ်ခုထွက်သွား၏တည်ရှိမှုအဘို့သက်သေသာဓက။ Experientia 21: 409-410 ။
ဒိုင်ယာနာ M က, Pistis M က, Muntoni တစ်ဦးက, Gessa G. အ 1995 ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာကြွက်များတွင် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏လေးနက်ကျဆင်းခြင်း။ J ကို Pharmacol Exp Ther 272: 781-785 ။
ဒိုင်ယာနာ M က, Muntoni AL, Pistis M က, Melis M က, Gessa GL ။ 1999 ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာပြီးနောက် mesolimbic dopamine အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျှော့ချရေးတည်မြဲသော။ EUR J ကို neuroscience 11: 1037-1041 ။
di Chiara, G, Imperato အေ 1988 ။ လူသားမြားသဖွငျ့စော်ကားမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ 85: 5274-5278 ။
Duman RS, Tallman JF, Nestler EJ ။ 1988 ။ acute နှင့်ဦးနှောက်အတွက် adenylate cyclase ၏နာတာရှည် opiate-စည်းမျဉ်း: locus coeruleus အတွက်သီးခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 246: 1033-1039 ။
Ennis M က, Aston-ဂျုံးစ်, G, Shiekhattar R. 1992 ။ နျူကလိယ paragigantocellularis သို့မဟုတ် noxious အာရုံခံဆွခြင်းဖြင့် locus coeruleus အာရုံခံ၏ activation intracoerulear excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် neurotransmission ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးနှောက် Res 598: 185-195 ။
fields HL ။ 2011 ။ အဆိုပါဆရာဝန်၏အကြပ်အတည်း: Opiate analgesics နှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ 69: 591-594 ။
Fischer SJ, Arguello AA ကို, ချာလ်တန် JJ, Fuller, DC, Zachary V ကို, Eisch AJ ။ 2008 ။ မော်ဖင်းအကိုက်သောအသွေးကိုအဆင့်ဆင့်, မှီခိုနှင့် hippocampal subgranular ဇုန်ပြန့်ပွား၏စည်းမျဉ်းအုပ်ချုပ်ရေးပါရာဒိုင်းအပေါ်အားကိုး။ neuroscience 151: 1217-1224 ။
ခြေလျင် SL, Aston-ဂျုံးစ်, G, Bloom FE ။ 1980 ။ နိုးကြွက်များနှင့်မျောက်များအတွက် locus coeruleus အာရုံခံ၏ Impulse လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံဆွနှင့် arousal တစ် function ကိုဖြစ်ပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ 77: 3033-3037 ။
Ford ကားက CP, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Williams က JT ။ 2006 ။ Properties ကိုနှင့် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ opioid တားစီးပစ်မှတ်တည်နေရာအရသိရသည်ခြားနားသည်။ J ကို neuroscience 26: 2788-2797 ။
Geisler S က, Derst ကို C, Veh RW, Zahm DS ။ 2007 ။ ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၏ Glutamatergic afferents ။ J ကို neuroscience 27: 5730-5743 ။
ဇော့က F, Le Moines, C, Aston-ဂျုံးစ် G. အ 2006 ။ ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း ventral tegmental dopamine အာရုံခံအပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ J ကို neuroscience 26: 5720-5726 ။
Guitart X ကို, Nestler EJ ။ 1989 ။ အဆိုပါ locus coeruleus နှင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏အခြားဒေသများအတွက် morphine- နှင့်သိသိ amp-စညျးမဉျြးစညျးကမျး phosphoproteins (MARPPs) ၏ identification: စည်းမျဉ်းဥပဒေစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်သည်။ J ကို neuroscience 9: 4371-4387 ။
Guitart X ကို, Thompson ကနေ MA, Mirante က CK, Greenberg ME, Nestler EJ ။ 1992 ။ သိသိ amp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း (CREB) ကိုကြွက် locus coeruleus အတွက်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့် phosphorylation ၏စည်းမျဉ်း။ J ကို Neurochem 58: 1168-1171 ။
K ကိုဝမ် RY Gysling ။ 1983 ။ ကြွက်များတွင် A10 dopamine အာရုံခံ၏မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် activation ။ ဦးနှောက် Res 277: 119-127 ။
ဟန် MH, Bolanos, CA, အစိမ်းရောင်က TA, Olson VG, Neve RL, လျူ RJ, Aghajanian GK, Nestler EJ ။ 2006 ။ အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အ opiate ဆုတ်ခွာအပြုအမူတွေ: ကြွက် locus ceruleus အတွက်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း၏အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience 26: 4624-4629 ။
Ishimatsu M က, Williams က JT ။ 1996 ။ pericoerulear ဒေသများတွင် dendritic interaction ကထဲကနေ locus coeruleus ရလဒ်များကိုအတွက် synchronous လှုပ်ရှားမှု။ J ကို neuroscience 16: 5196-5204 ။
Ivanov တစ်ဦးက, Aston-ဂျုံးစ် G. အ 2001 ။ စသည်တို့အတွက် locus coeruleus အာရုံခံအတွက်ဒေသခံ opiate ဆုတ်ခွာ။ J ကို Neurophysiol 85: 2388-2397 ။
ဂျွန်ဆင် SW, မြောက်အမေရိက RA ။ 1992 ။ Opioids ဒေသခံ interneurons ၏ hyperpolarization အားဖြင့် dopamine အာရုံခံ excite ။ J ကို neuroscience 12: 483-488 ။
Kogan JH, Nestler EJ, Aghajanian GK ။ 1992 ။ opiate-မှီခိုကြွက်များကနေဦးနှောက်ကိုအချပ်အတွက် locus coeruleus အာရုံခံ၏ elevated Basal ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများ: 8-Br-စခန်းများတိုးမြှင်တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအသင်းမှ။ EUR J ကို Pharmacol 211: 47-53 ။
et al Koo JW, Mazei-Robison က MS, Laplant မေး, Dietz DM, ဖာဂူဆန်: D, Lobo က M, Ohnishi yn, Feng တို့ဂျေ, Ohnishi YH, Mouzon အီး။ 2010 ။ မော်ဖင်းအကိုက်ရန်မော်လီကျူးများနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိအတွက် VTA အတွက် BDNF ၏အခန်းက္ပ။ တွင် 40th နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး, အာရုံကြောသိပ္ပံ 2010, #368.5, Society ကအာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့, ဝါရှင်တန်ဒီစီ
Koob gf, Le Moal အမ် 2001 ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ်၏ dysregulation နှင့် allostasis ။ Neuropsychopharmacology 24: 97-129 ။
Krishnan V ကို, ဟန် MH, Mazei-Robison M က, Iniguez SD, Ables JL, Vialou V ကို, Berton အို Ghose S က, Covington HE 3rd ။ , Wiley MD, et al ။ 2008 ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းအချက်ပြ AKT စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုမှဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 64: 691-700 ။
Kuehn BM ။ 2007 ။ Opioid ဆေးညွှန်းပျံဝဲ: တရားဝင်အသုံးပြုမှုပေါများအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှု။ ဂျေအေအမ်အေ 297: 249-251 ။
Lammel S က, Hetzel တစ်ဦးက, Häckelအိုဂျုံးစ်ငါ Liss B, Roeper ဂျေ 2008 ။ တစ်ဦးကို dual mesocorticolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်း mesoprefrontal အာရုံခံ၏ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ။ အာရုံခံဆဲလျ 57: 760-773 ။
Lammel S က, Ion ပစ, Roeper J ကို, Malenka RC ။ 2011 ။ ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျ synapses ၏ Project-တိကျတဲ့မော်ဂျူ။ အာရုံခံဆဲလျ 70: 855-862 ။
ယာဉ်ကြော DA, Lessard AA ကို, ချမ်း J ကို, Colago EE, Zhou Y ကို, Schlussman SD, Kreek MJ, Pickel VM က။ 2008 ။ စူးရှသောသို့မဟုတ်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ၌ AMPA အဲဒီ receptor GluR1 subunit ၏ subcellular ဖြန့်ဖြူးအတွက်တိုင်းဒေသကြီး-တိကျတဲ့အပြောင်းအလဲများကို။ J ကို neuroscience 28: 9670-9681 ။
ယာဉ်ကြော-Ladd SB, Pineda J ကို, Boundy VA သို့, Pfeuffer T က, Krupinski J ကို, Aghajanian GK, Nestler EJ ။ 1997 ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး, ဇီဝကမ္မနှင့် opiate မှီခိုနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အမူအကျင့်သက်သေအထောက်အထား: အ locus coeruleus အတွက် CREB (Camp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း) ။ J ကို neuroscience 17: 7890-7901 ။
Leone P ကို, Pocock: D, ပညာရှိ RA ။ 1991 ။ မော်ဖင်းအကိုက်-dopamine အပြန်အလှန်: Ventral tegmental မော်ဖင်းအကိုက်နျူကလိယ dopamine လွှတ်ပေးရန် accumbens တိုးပွားစေပါသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 39: 469-472 ။
လျူ Y ကို, ဝမ် Y ကို, Jiang Z ကို, ဝမ်ကို C, Zhou W က, ဝမ် Z. 2007 ။ လမ်းကြောင်းပြအဆိုပါ extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase mPer1 ခြင်းဖြင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်၏မော်ဂျူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ neuroscience 146: 265-271 ။
Luscher ကို C, Malenka RC ။ 2011 ။ စွဲလမ်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity: မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကို မှစ. circuit ကိုပြုပြင်ဖို့။ အာရုံခံဆဲလျ 69: 650-663 ။
Madhavan တစ်ဦးကသူသည် L ကို, Stuber GD, Bonci တစ်ဦးက, Whistler JL ။ 2010 ။ Micro-Opioid အဲဒီ receptor endocytosis naloxone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကသွေးဆောင် ventral tegmental ဧရိယာဂါဘမြို့သားဂီယာအတွက်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ကာကွယ်ပေးသည်။ J ကို neuroscience 30: 3276-3286 ။
Manchikanti L ကိုချင်း B, Ailinani H ကို, Pampati V. 2010 ။ ကုထုံးကိုအသုံးပြုခြင်း, အလွဲသုံးမှုနှင့် opioids ၏ nonmedical အသုံးပြုမှု: တစ်ဦးကဆယ်တစ်နှစ်ရှုထောင့်။ နာကျင်မှုသမား 13: 401-435 ။
Margolis eb, Hjelmstad GO, Bonci တစ်ဦးက, Fields HL ။ 2003 ။ Kappa-opioid agonists တိုက်ရိုက် midbrain dopaminergic အာရုံခံတားစီး။ J ကို neuroscience 23: 9981-9986 ။
Margolis eb, Lock ကို H ကို, Hjelmstad GO, Fields HL ။ 2006 ။ revisited အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ: dopaminergic အာရုံခံတစ်ခု electrophysiological အမှတ်အသားရှိပါသလား? J ကို Physiol 577: 907-924 ။
Margolis eb, Mitchell က JM, Ishikawa J ကို, Hjelmstad GO, Fields HL ။ 2008 ။ Midbrain dopamine အာရုံခံ: Projection ပစ်မှတ်အရေးယူအလားအလာကြာချိန်နှင့် dopamine: D (2) အဲဒီ receptor တားစီးဆုံးဖြတ်သည်။ J ကို neuroscience 28: 8908-8913 ။
Matsuoka ငါ Maldonado R ကို, ရွှေ့ဆိုင်း N ကို, နိုက F, Hanoune J ကို, Roques ကို BP ။ 1994 ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးဦးနှောက်အမျိုးအစား VIII adenylyl cyclase mRNA ၏ဒေသ-တိကျတဲ့တိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ EUR J ကို Pharmacol 268: 215-221 ။
et al Mazei-Robison က MS, Koo JW, Friedman AK, Lansink CS, Robison AJ, Vinish M က, Krishnan V ကိုကင်မ်က S, Siuta MA, Galli တစ်ဦး။ 2011 ။ ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံအတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အလိုက်အထိုက်နေတတ် mTOR အချက်ပြခြင်းနှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အခန်းက္ပ။ အာရုံခံဆဲလျ 72: 977-990 ။
McClung, CA, Nestler EJ, Zachary V. 2005 ။ အဆိုပါ locus ceruleus နှင့် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်၏စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience 25: 6005-6015 ။
Nair-Roberts သည် RG, Chatelain-Badie SD, Benson အီး, အဖြူရောင်-Cooper က H ကို, Bolam JP, Ungless MA ။ 2008 ။ dopaminergic, GABAergic နှင့်ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ, substantia nigra နှင့် retrorubral လယ်ပြင်၌ glutamatergic အာရုံခံ၏ Stereological ခန့်မှန်းချက်။ neuroscience 152: 1024-1031 ။
Nestler EJ ။ 1992 ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ J ကို neuroscience 12: 2439-2450 ။
Nestler EJ ။ 2001 ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ သဘာဝတရားဗြာ neuroscience 2: 119-128 ။
Nestler EJ ။ 2004 ။ သမိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်: opiate နှင့်ကိုကင်းစွဲ၏မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ 25: 210-218 ။
Nestler EJ, Aghajanian GK ။ 1997 ။ စွဲလမ်း၏မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအခြေခံ။ သိပ္ပံ 278: 58-63 ။
Nestler EJ, Tallman JF ။ 1988 ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုကြွက် locus coeruleus အတွက်သိသိ amp-မှီခိုပရိုတိန်း kinase လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ Mol Pharmacol 33: 127-132 ။
Nestler EJ, Alreja M က, Aghajanian GK ။ 1994 ။ opiate လုပ်ဆောင်ချက်မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာယန္တရားများ: ကြွက် locus coeruleus လေ့လာစရာများ။ ဦးနှောက် Res Bull 35: 521-528 ။
Niehaus JL, Murali M က, Kauer ဂျေအေ။ 2010 ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး ventral tegmental ဧရိယာ၌ inhibitory synapses မှာ LTP အယှက်။ EUR J ကို neuroscience 32: 108-117 ။
Nugent FS, Penick EC, Kauer ဂျေအေ။ 2007 ။ Opioids inhibitory synapses ၏ရေရှည်အလားအလာပိတ်ဆို့။ သဘာဝ 446: 1086-1090 ။
Nugent FS, Niehaus JL, Kauer ဂျေအေ။ 2009 ။ GABAergic synapses မှာ LTP အတွက်အချက်ပြ PKG နှင့် PKA ။ Neuropsychopharmacology 34: 1829-1842 ။
Numan S က, ယာဉ်ကြော-Ladd SB, Zhang က L ကို, Lundgren KH, စယ် DS, Seroogy KB, Nestler EJ ။ 1998 ။ နာတာရှည် opiate ကုသမှုနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း catecholaminergic အရေးပါအတွက် neurotrophin နှင့် trk အဲဒီ receptor mRNAs ၏ differential စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience 18: 10700-10708 ။
O 'Brien က CP ။ 2001 ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ Goodman နှင့် Gilman ရဲ့ဟော်မုန်းများ၏ pharmacological အခြေခံ (ed ။ JG Hardman, LE Limbird, AG က Gilman), စစ။ 621-642 ။ McGraw-Hill ကနယူးယောက်။
Olson VG, Zabetian က CP, Bolanos, CA, Edwards က S နဲ့, Barrot M က, Eisch AJ, Hughes T က, ကိုယ်ပိုင် DW, Neve RL, Nestler EJ ။ 2005 ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှစ်ခု function ကွဲပြားငျဒသေအဘို့သက်သေသာဓက: Camp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းများကမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience 25: 5553-5562 ။
Ortiz J ကို, Harris က HW, Guitart X ကို, Terwilliger RZ, Haycock JW, Nestler EJ ။ 1995 ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်နေဖြင့်ဒေသတွင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်း: ဦးနှောက်ထဲမှာ Extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျးပရိုတိန်း kinases (ERKs) နှင့် ERK kinase (MEK) ။ J ကို neuroscience 15: 1285-1297 ။
Parlato R ကို, Cruz H ကို, Otto ကို C, et al Murtra P ကို, Parkitna JR, မာတင် M က, Bura-SA, Begus-Nahrmann Y ကို, ဗွန် Bohlen und Halbach အို Maldonado R ကို။ 2010 ။ locus coeruleus ပစ်ခတ်ရန်နှင့်ဆုတ်ခွာအပြုအမူအပေါ် noradrenergic အာရုံခံအတွက်စခန်း-တုံ့ပြန်မှုကူးယူအချက်များ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ ablation ၏ဆိုးကျိုးများမော်ဖင်းအကိုက်မှနာတာရှည်ထိတွေ့ပြီးနောက်။ J ကို Neurochem 115: 563-573 ။
လာကြတယ်, L, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ, တေလာ JR ။ 1997 ။ ပရိုတိန်းဓာတ်၏ microinfusion အပေါ်သို့ opiate ဆုတ်ခွာအပြုအမူတွေ၏ဆန့်ကျင်ဘက်မော်ဂျူပု locus coeruleus သို့မဟုတ် periaqueductal မီးခိုးရောင်သို့ Active နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးက inhibitor kinase ။ J ကို neuroscience 17: 8520-8527 ။
Rasmussen K ကို Beitner-Johnson က DB, Krystal JH, Aghajanian GK, Nestler EJ ။ 1990 ။ Opiate ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ကြွက် locus coeruleus: အပြုအမူ, electrophysiological နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျး Correlate ။ J ကို neuroscience 10: 2308-2317 ။
ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ 1999 ။ မော်ဖင်းအကိုက်အတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့်ကြွက်များ၏ neocortex အတွက်အာရုံခံ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာပွောငျးလဲ။ synapses 33: 160-162 ။
ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, ဗေ့ခ်ျ VR, Kolb ခ 2002 ။ ကျယ်ပြန့်ပေမယ့် dendritic နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ကျောရိုး, hippocampus နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏ neocortex အပေါ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မော်ဖင်းအကိုက်နှိုင်းယှဉ် experimenter- ၏ဒေသတွင်းတိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ synapses 46: 271-279 ။
Russo SJ, Bolanos, CA, Theobald DE, DeCarolis NA, Renthal W က, Kumar ကတစ်ဦး, Winstanley, CA, Renthal NE, Wiley MD, ကိုယ်ပိုင် DW, et al ။ 2007 ။ midbrain dopamine အာရုံခံအတွက် IRS2-Akt လမ်းကြောင်း opiates မှအမူအကျင့်များနှင့်ဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience 10: 93-99 ။
Russo SJ, Mazei-Robison က MS, Ables JL, Nestler EJ ။ 2009 ။ စွဲလမ်းအတွက် Neurotrophic အချက်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 73-82 ။
Russo SJ, Dietz DM, Dumitriu: D, Morrison JH, Malenka RC, Nestler EJ ။ 2010 ။ အဆိုပါစွဲ synapses: နျူကလိယ accumbens အတွက် Synaptic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏ယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 33: 267-276 ။
Saal: D သည် Dong Y ကို, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC ။ 2003 ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး dopamine အာရုံခံတစ်ဘုံ Synaptic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပေါ်။ အာရုံခံဆဲလျ 37: 577-582 ။
Sarti က F, Borgland SL, Kharazia VN, Bonci အေ 2007 ။ acute ကင်းထိတွေ့ကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာရေရှည်အလားအလာပွောငျးလဲ။ EUR J ကို neuroscience 26: 749-756 ။
Sesack SR, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ 2010 ။ Cortico-Basal Ganglia ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကို: Microcircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35: 27-47 ။
Shaw-Lutchman tz, Barrot M က, Wallace T က, Gilden L ကို, Zachary V ကို, Impey S က, Duman RS, မုန်တိုင်း: D, Nestler EJ ။ 2002 ။ naltrexone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-mediated ကူးယူ၏ဒေသတွင်းနှင့်ဆယ်လူလာမြေပုံ။ J ကို neuroscience 22: 3663-3672 ။
Sklair-Tavron L ကို, ရှီ WX, ယာဉ်ကြော SB, Harris က HW, Bunney BS, Nestler EJ ။ 1996 ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာမြင်နိုင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ 93: 11202-11207 ။
Spiga S က, Serra မိသားစုဆရာဝန်, Puddu MC, Foddai M က, ဒိုင်ယာနာအမ် 2003 ။ အဆိုပါ VTA အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်မူမမှန်: Confocal လေဆာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ microscopy ။ EUR J ကို neuroscience 17: 605-612 ။
Swanson LW ။ 1982 ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ကပ်လျက်ဒေသစီမံကိန်း: တစ်ဦးကပေါင်းစပ်ချောင်း retrograde tracer နှင့်ကြွက်များတွင်နဲ့ Immunofluorescence လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res Bull 9: 321-353 ။
Torrecilla M က, မှတ်သားမှု CL, Cintora SC, Stoffel M က, Williams က JT, Wickman K. 2002 ။ Kir3.2 နှင့် Kir3.3 subunits ်, G-ပရိုတိန်း-န့်သတ်ထားထားပြီးပိုတက်စီယမ်လိုင်းများ locus ceruleus အာရုံခံအပေါ် opioids ၏စူးရှသော inhibitory သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေ။ J ကို neuroscience 22: 4328-4334 ။
Torrecilla M က, Quillinan N ကို, ဝီလျံ JT, Wickman K. 2008 ။ အကျူးခြင်းနှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုပြီးနောက် locus coeruleus အာရုံခံ၏ postsynaptic စည်းမျဉ်း: GIRK-နောက်ကောက်ကြွက်၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ EUR J ကို neuroscience 28: 618-624 ။
ဗန် Bockstaele EJ, Reyes BA, Valentino RJ ။ 2010 ။ အဆိုပါ locus coeruleus: စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် opioids opiate အလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဆုံမှတ်ရှိရာတစ်ဦးက key ကိုနျူကလိယ။ ဦးနှောက် Res 1314: 162-174 ။
Williams က JT, Egan TM, မြောက်အမေရိက RA ။ 1982 ။ Enkephalin နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအလယ်ပိုင်းတွင် neuron အပေါ်ပိုတက်စီယမ် channel များကိုဖွင့်လှစ်။ သဘာဝ 299: 74-77 ။
Williams က JT, Bobker DH, Harris က GC ။ 1991 ။ ဦးနှောက်အချပ်အတွက် locus coeruleus အာရုံခံအတွက် Synaptic အလားအလာ။ prog ဦးနှောက် Res 88: 167-172 ။
Williams က JT သည်ခရစ် MJ, Manzoni O. 2001 ။ opioid မှီခိုဖြန်ဖြေဆယ်လူလာနှင့် Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ Physiol ဗြာ 81: 299-343 ။
ဝံပုလွေ DH, Numan S က, Nestler EJ, စယ် DS ။ 1999 ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် mesolimbic dopamine စနစ် phospholipase Cgamma ၏စည်းမျဉ်း။ J ကို Neurochem 73: 1520-1528 ။
ဝံပုလွေ DH, Nestler EJ, စယ် DS ။ 2007 ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်နေဖြင့်အာရုံခံ PLCgamma ၏စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res 1156: 9-20 ။
Zachary V ကို, လျူ R ကို, LaPlant မေး, Xiao, G, Renthal W က, ချမ်း GC, မုန်တိုင်း DR, Aghajanian, G, Nestler EJ ။ 2008 ။ adenylyl ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ opiate မှီခိုအတွက် 1 နှင့် 8 cyclases: အပြုအမူ, electrophysiological နှင့်မော်လီကျူးလေ့လာမှုများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 63: 1013-1021 ။